Sein Lyan - စိ န် လျှံ: June 2009
ဆရာဇော်ဂျီက ပြောခဲ့တယ် ………..။
ငါ... အချစ်တွေနဲ့ အနုပညာမြောက်တဲ့ ဘဝတစ်ခု
ဖိုးကြံဆိုတာ ဖိုးစိန်ရဲ့ အရင်စာရေးတဲ့နာမည်ပါ.. သူငယ်ချင်းတွေက ကျန်ရစ်ဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်.. ဖိုးကျန်တဲ့လေ...
ဒီကဗျာလေးကတော့ (၂၀၀၂)ကပါ... အဲဒီနှစ်က “မင်း-ငါ-ကိုယ်-အချစ်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကဗျာစာအုပ် ပါးပါးလေး တစ်အုပ်ထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်... ကော်ဖီဖိုးတောင်မကျေဘူး... အကြောင်းသိတွေ ဆိုတော့ ဝေဖန်လိုက်တာများ... ကဗျာစာအုပ်တောင် ဆွဲဖြဲချင်စိတ်ပေါက်တဲ့အထိ... ရေးခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ ကျနော်ရယ်... ကလျာရယ်... ငယ်ရယ်.. ဟေမာန်ရယ်... ချစ်ဦးရယ်...ပါ... ဒီထဲကမှ တစ်ယောက်သောသူကို ရည်ရွယ်ပြီးရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးကို တင်လိုက်တာပါ... (စကားများလွန်းလို့)း)
Writer Sein Lyan Time 4:21 pm 34 comments: Links to this post
အလွမ်းတွေကို ရှတစွာ ထုဆစ်သက္ကရာဇ်တွေကို ဖြိုဖျက်ရင်း
ကျိုးပျက်ကွဲအက်နေတဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံကို သဂြိုလ်ထားလေရဲ့…..။
စက္ကန့် မိနစ် နာရီ နေ့ လ နှစ်တွေရဲ့
ဒီကဗျာလေးက (၂၀၀၁)ခုနှစ် တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ဗလာစာအုပ်မှာ အမှတ်တရ စုရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးပါ... (ကဗျာစာအုပ်ထုတ်ဖို့ မတတ်နိုင်လို့လေ) ဒီကဗျာလေးကို တီချယ်မီကို ပေးဖတ်တော့ တီချယ်မီကပြောဖူးတယ်... အဲဒီဖျားနေတဲ့ တောင်ပံကို အမွေးနှုတ်ပြီး ကြော်စားလိုက်လေတဲ့...း) ခုတစ်လော စာရေးပျင်း အိမ်လည်ပျင်းနေပေမယ့် ကိုယ့်အမတွေ အကိုတွေရဲ့ ကဗျာကောင်းတွေ စာကောင်းတွေကိုမွှေနှောက်မိနေတယ်... အနည်ထိုင်အောင် ကြိုးစားရင်းပေါ့လေ... ကဗျာရေးကောင်းတဲ့ အမတွေရှေ့မှာ ဒီကဗျာလေးကို တင်လိုက်ရတာ အားတော့နာပါရဲ့... ဒါပေမယ့် အမကြီးတွေရဲ့ ကဗျာကောင်းကောင်း တွေကို ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ရေးထားခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီကဗျာလေးကို သတိရသွားလို့ပါ... ခံစားချက်တစ်ချို့ ပါဝင်ခဲ့သလို ခုချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာလဲပါတယ်...
ကဗျာဆရာမကြီး အမ နှစ်ယောက် လာဖတ်ရင်..... ကဗျာဆရာကြီး ... လာဖတ်ရင်တော့... ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ သွားဖြဲပြုံးရင်း
“သားက ငယ်ပါသေးတယ်ဗျာ”..... လို့ပဲပြန်ဖြေမှာနော်...း)
Writer Sein Lyan Time 2:15 am 32 comments: Links to this post
Writer Sein Lyan Time 12:50 am 43 comments: Links to this post
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က လသာတဲ့ ညတွေမှာ ထမင်းစားပြီးရင် ကျနော်တို့ မိသားစုတွေ အိမ်ရှေ့က ကန်ပေါ်မှာ ဖျာလေးခင်းပြီး စကားပြောကျတယ်… အဖေက ကျနော်ညီအကို နှစ်ယောက် နဲ့ ညီမလေးကို ပုံပြော သီချင်းဆိုပြရင် ပုံပြောခ အဖြစ် ကျနော်တို့ ညီအကိုက အဖေ့ကို မျက်ခုံးမွေး သန်းရှာတာ ကျောကုန်းဖု ထိုးတာ ဂဏန်းလမ်းလျှောက်နင်းတာ မျိုးတွေ အလှည့်ကျ လုပ်ရတယ်… အမေကတော့ အဖေ့ဘေးမှာ ထိုင်ပြီး ယပ်တောင်လေး တစ်ချောင်းနဲ့ ခြင်ယပ်ပေါ့…
တစ်ခါတစ်လေ အဖေ့ ပုံပြင်ထဲမှာ မျောသွားတာ ရှိသလို တစ်ခါတစ်လေ အိပ်ပျော်သွားတာမျိုးရှိတယ်… အဖေက အသိပေးချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တခုခုကို ဆုံးမချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပုံတို ပတ်စလေးတွေနဲ့ နားဝင်အောင်ပြောတတ်တယ်… နောက် ရွေနန်းကျင်တို့ တစ်ဝဂူတို့ ဆိုရင် ကျနော်အကြိုက်ဆုံး သီချင်းပုံပြင်လေးတွေ… အဖေသီချင်းဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ အိပ်ပျော်ပီးမှတ်…
အဖေသီချင်းဆိုပြီး ပြောပြဖူးတဲ့ တစ်ဝဂူ ပုံပြင်ဆို အခုထိ မဆုံးသေးဘူး… အဖေကတော့ ညတိုင်းပြောပါတယ်… အမေလုပ်သူကတောင် အလွတ်ရတယ်… ကျနော်တို့ မောင်နှမတွေက အိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတော့ ပုံကို အစကနေပြန်ပြန်ပြောရော… အဲဒါကြောင့် သီချင်းပုံပြင်ဆို မဆုံးတော့ဘူး…
တစ်ညတော့ ကျနော်တို့ မိသားစု ကန်ပေါ်ထိုင်ရင်း အမေလုပ်သူက လေလယ်လိုက်တာ ညီလုပ်သူရဲ့ အနားမှာ ဆိုတော့ အငယ်ကောင်က အမေ့အီးက နံလိုက်တာ ပုပ်နေတာပဲ ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးတယ်လေ... အဖေက “အမေကို ချစ်တယ်ဆို... ချစ်ရင် အမေ့ မစင်ကိုတောင် စားဖူးရမယ်” ဆိုပြီး စတယ်.. အဲဒါနဲ့ ညီမလေးက မစင်က ဘာအရသာရှိလဲ ဒီလောက်နံတာဆိုတော့ အဖေက “ကဲ သားတို့ သမီးတို့သိအောင် မစင် ဘာအရသာရှိလဲ ဆိုတာပြောပြမယ် ”ဆိုပြီး ဒီပုံပြင်လေးကို ပြောပြပါတယ်…
ရှေးအခါတုန်းက ဘာမသိတဲ့ ဗာရာဏသီပြည်မှာ ဘာမသိတဲ့ မင်းတစ်ပါး အုပ်စိုးပါသတဲ့… ဒီဗာရာဏသီမင်းဟာ အရာရာကို စူးစမ်း စပ်စုလိုစိတ်ရှိတာကြောင့် ဥာဏ်ပညာ နဲ့ ပြည့်စုံပြီး ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝတဲ့ မူးမတ်များကိုသာ အခစားဝင်ဖို့ ရွေးချယ်ခန့် ထားသတဲ့လေ… သူမေးသမျှ မေးခွန်းတိုင်းကိုလဲ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ မေးတတ်သတဲ့လေ...
တစ်ပတ်တစ်ခါ ညီလာခံဝင်ရင် မင်းကြီးက သူသိလိုတဲ့ အကြောင်းအရာများကို မေးမြန်းပြီး နောက်တစ်ပတ်ညီလာခံ ကျရင် အဖြေတော်ကို ပေးစေတော်မူသတဲ့… မင်းကြီးကျေနပ်အောင် အဖြေပေးနိုင်သူများကိုလဲ မင်းကြီးက ဆုလာဘ်များကို အစဉ်ပေးသနားတော် မူသတဲ့… မဖြေနိုင်ခဲ့ရင်တော့ မင်ကြီးက “ငါ့လိုစဉ်းစားတာကို ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီဘူး” ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတတ်သေးသတဲ့လေ…
အပတ်စဉ်ရောက်တိုင်း မင်းကြီးက ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ အရာတွေ… ဘယ်သူမှ မထင်မှတ်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးတတ်လွန်းတော့ မင်းကြီး ကျေနပ်လောက်အောင် အဖြေပေးနိုင်တဲ့ မူးမတ် လေးယောက်သာ နောက်ဆုံး ဆံကာတင်ကျန်ပြီး ဒီလို ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ အရာများကိုထပ်ခါတလဲလဲ မင်းကြီးကျေနပ်လောက်အောင် ဖြေနိုင်နေခဲ့တယ်…
ဒါကိုမင်းကြီးက မကျေနပ်နိုင်ပဲ တနေ့ မနက်ညီလာခံဝင်တော့…
မင်းကြီးက… “တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်နေတဲ့ ရေမြေ့အရှင် ငါဘုရင် ကဒီတစ်ခေါက် အကြောင်းအရာ တစ်ခုကိုသိလိုတော်မူ၍ မေးတော်မူ လိုတယ်… ဒီအကြောင်းရာသည်ကား…. မစင်၏ အရသာ မည်သို့မည်ပုံ ရှိသည်ဆိုတာကို သိလိုတော်မူတယ်… နောက်တစ်ပတ် ညီလာခံ ဝင်လျှင် ငါကိုယ်တော်မြတ်သိလိုတော် မူသော မစင်အရသာကို လျှောက်တင်ရမယ်… မလျှောက်တင်နိုင်ပါက ငါကိုယ်တော်မြတ်နိုင်ငံက နေ ရာထူးစည်းစိမ်ကို ဖြုတ်ပြီး နှယ်နှင်ဒဏ်ပေးတော်မူမယ်” လို့ မိန့်တော် မူပြီး ညီလာခံကို သိမ်းစေခဲ့သတဲ့လေ…
မူးမတ်လေးယောက်ကတော့ မျက်စိမျက်နှာပျက်ပြီး နောက်တစ်ပတ် ညီလာခံ ဝင်ဖို့အရေးကို တွေးကြောက်လို့ နန်းတော်ကနေ ခေါင်းငိုက်စိုက်ပြန်ခဲ့သတဲ့… နောက်တစ်ပတ်အဖြေမှန် ကိုမပေးနိုင်ရင် လူပုံအလယ် အရှက်ကွဲရုံမျှမက မိသားစုအလိုက် နယ်နှင်ခံပေးခံထိမယ့် အရေးတွေးပူလို့ ရက်သတ္တပတ်ပြည့်အောင် စောင့်ခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေမှာ သူတို့အတွက် ငရဲကျနေချိန်… မင်းကြီးကတော့ ဒီတစ်ခါ သူတို့ ဖြေရှင်းမယ့် နည်းလမ်းများကို တွေးရင်း ဝမ်းသာနေပါသတဲ့…
ရက်သတ္တပတ်ပြည့်ပြီးလို့ ညီလာခံဝင်တဲ့ အခါမှာ ဗာရာဏသီပြည်သူ ပြည်သားများက မစင်အရသာ မည်သို့ မည်ပုံရှိကြောင်းကို သိလိုတော်မူကြတဲ့ အတွက် နန်းရင်ပြင်တစ်ခုလုံး အုံ့အုံ့ ကြွက်ကြွက်နဲ့ မူးမတ်များရဲ့ အဖြေကို နားထောင်ဖို့ရောက်လာကြသတဲ့…
မင်းကြီး ပလင်ပေါ်ရောက်တော့ “ကဲ ငါကခန့်ထား ငါ့ဆန်စားတဲ့ ငါ့အလိုတော် မူးမတ်များ… ငါသိလိုတော် မူသော မစင်အရသာကို ယခု ပြည်သူပြည်သား များရှေ့တွင် ပြောကြားစေ”လို့ မိန့်တော်မူတော့…
ပထမမူးမတ်က “အရှင်ဘုရား… မစင်ရဲ့ အရသာက ချိုသော အရသာ ရှိကြောင်းပါဘုရား…”
ထိုအခါမင်းကြီးက အံ့သြစွာဖြင့် “ကဲ… မစင် အရသာ ဘယ်လိုချိုကြောင်းကို ရှင်းစမ်းပါအုံး အမတ်ကြီးရဲ့”
ထိုအခါ ပထမအမတ်က “ဘုရားကျနော်မျိုး မစင်အရသာကို သိလိုတော်မူ၍ တစ်ပတ်တိတိ အစားကောင်းများကို စားပြီး စွန့်ထားတဲ့ မစင်ကို စားရန် ကြိုးစား ပါတယ်ဘုရား… သို့ပါသော်လည်း စားဖို့မဝံ့ရဲခဲ့ပါ… ဒီမနက် ညီလာခံဝင်ခါနီးမှ မဖြစ်မနေဆိုပြီး မစင်သွား အလျှင်အမြန် မျက်စိမှိတ်ပြီး လက်နဲ့တစ်တို့ စားခဲ့ပါသဖြင့် မစင်အရသာ ချိုကြောင်းသိခဲ့ရပါသည်ဘုရား” လို့ လျှောက်တင်တော့ မင်းကြီးနှင့် တကွ ပြည်သူပြည်သားများက ဝက်ဝက်ကွဲ ရယ်မောကြသတဲ့…
“ကဲ ဒုတိယ အမတ်ကြီးကရော”
“တင်ပါ့ဘုရား…. မစင်၏အရသာ သည် ချဉ်သော အရသာ ရှိကြောင်းပါဘုရား…”
ထိုအခါ မင်းကြီးထပ်မံ အံ့သြတဲ့ အမူအရာနဲ့ “အလျှင်အမြန်လျှောက်တင်စမ်း မောင်မင်း”
“ဒီလိုပါဘုရား… မစင်၏ အရသာ ချဉ်သည်ဆိုသည်မှာ ဘုရားကျွန်တော်မျိုး လဲ မစင်ကို စားဖို့ရန် ချိတုံ ချတုံ ဖြစ်နေခဲ့ရပါသည်ဘုရား… မနေ့ကတော့ နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ရမှာကို သိတော့ မစင်သွားခဲ့ပါတယ် ဘုရား… သို့ပေသည့် မစင်စားဖို့ရန် မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေသည့်အတွက် နေစောင်းခဲ့ရပါတယ် ဘုရား.. သို့ပေမယ့် မိသားစု အရေးတွေးပူလို့ လက်နဲ့တစ်တို့ကို မြည်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘုရား… ထိုအရသာမှာ ချဉ်တဲ့ အရသာဖြစ်ကြောင်းပါဘုရား” ဟုလျှောက်တင်တော့ မင်းကြီး နဲ့ ပြည်သူပြည်သားများ သဘောတကျ ရယ်မောကြပြန်တယ်…
“ကဲ… တတိယ အမတ်ကြီးကရော”
“တင်ပါ့ဘုရား… အရှင်မင်းကြီး သိလိုတော်မူသော မစင်အရသာမှာ ခါးသက် ကြောင်းပါဘုရား… ”
“အလို… မောင်မင်းက ထူးဆန်းပေတယ်… လျှောက်တင်စမ်းပါအုံး”
“ဒီလိုပါဘုရား… ကျွန်တော်မျိုးလဲ ဒုတိယ အမတ်လိုပဲ နောက်ဆုံး နေ့မှာ စားဖို့ရန် တစ်ပတ်လုံးလုံး အစားကောင်းများကိုသာ စားပြီး မနက်စောစော မစင်ကို စွန့်ခဲ့ပါတယ်… သို့ပါသော်လည်း မစင်ဖြစ်နေသည့် အတွက်ကြောင့် စားဖို့ရန် တွန့်ဆုတ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား… ဒီမနက် ညီလာခံ မဝင်ခင်မှသာ မနေ့က စွန့်ထားခဲ့တာကို စားခဲ့ပါတယ်ဘုရား… မစင်၏ အရသာမှာ ခါးသက်ကြောင်း ပါဘုရား” ဟုလျှောက်တင်တော့ မင်းကြီးနှင့် တကွ ပြည်သူ ပြည်သားများက သဘောကျပြီး ရယ်တော်မူပြန်တယ်…
“ကဲ… နောက်ဆုံးအမတ်ကြီးကရော… ဘယ်လိုအရသာမျိုး ခံစားမိတုန်း”
“တင်ပါ့ဘုရားးးး…. မစင်၏အရသာမှာ တနေ့တာ အတွင်း ချိုချဉ်ခါး အရသာသုံးမျိုးရကြောင်းပါဘုရား..”
ထိုအခါ မင်းကြီးနှင့်တကွ ပြည်သူပြည်သားများက
ဟို ဟင် ဟာ
စသဖြင့် အာမေဋိတ် သံများပြုပြီး မင်းကြီးမှာ အမျက်ထွက်တော်မူကာထို အမတ်ကို ဖမ်းချုပ်စေတယ်..
ပြီးတော့ “မောင်မင်း… မောင်မင်းဟာ ရှေးအမတ် သုံးယောက်ရဲ့စကားကို အခြေကောက်ပြီး မစင်ရဲ့ အရသာ ဘယ်လိုရှိကြောင်း ပြောတော့မူတယ်… မောင်မင်း၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှု လုံးဝမပါပါ… မောင်မင်း ငါကိုယ်တော်မြတ် အား ကျေနပ်အောင် အဖြေမပေးနိုင်ပါက မောင်မင်းကို ကွက်မြက်တော်မူမယ်” လို့ မိန့်တော်မူတော့…
နောက်ဆုံးအမတ်က “အရှင်မင်းကြီးဘုရား… တပည့်တော်လဲ မင်းကြီး၏ အမိန့်ကို မဖီဆန်ဝံ့ပါ… မင်းကြီးသိလိုသော မစင်အရသာကို သိရန်အလို့ငှာ အိမ်တွင် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့ ပါသည်ဘုရား… သို့ပါသော်လည်း မစင်ဆိုသည့် စိတ်ကြောင့် တွေဝေ နေခဲ့ပါသည်ဘုရား… မနေ့က နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည့် အတွက် ဘုရားကျွန်တော်မျိုး လူမသိအောင် မစင်ကို စွန့် ပြီးစားဖို့ရန် တောထဲသွားခဲ့ပါသည်ဘုရား… မစင်ကို စွန့်ပြီး သကာလမှာ ဘုရားကျွန်တော်မျိုး မစင်ပုံကို ကြည့်ရင်း တွေဝေနေခဲ့မိပါတယ်… ထိုအချိန်မှာ မစင်နားကို ယင်ကောင်များ တအုံးအုံးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘုရား… ထိုယင်ကောင်များကို ကြည့်ရင်း တွေဝေနေချိန်မှာပဲ ညနေကို စောင်းသွားပါတယ်ဘုရား… အဲဒီ အချိန်မှာ ယင်ကောင်တွေ ပျောက်သွားပြီး ဖြုတ်ကောင်လေးတွေ ရစ်ဝဲလာပြန်ပါတယ်… ဒါကို တွေဝေစွာနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေရင်း မိုးစုန်းစုန်းချုပ်တော့ စိတ်ပျက်စွာ အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်… မနက်ညီလာခံ မဝင်မှီ မဖြစ်နေ မစင်အရသာကို သိဖို့ရန် တောထဲသွားပြန်တော့ မနေ့က မစင်ပုံနား ကင်းမြီးကောက်တွေ လာစားနေတာ တွေ့လိုက်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ဘုရားကျွန်တော်မျိုး သိလိုက်တာက ယင်ကောင်ဆိုတာ အချိုကြိုက်တယ်… ဖြုတ်ကောင်လေးတွေက အချဉ်ဓာတ်ရတဲ့နေရာကို လာတတ်တယ်… ကင်းမြီးကောက် က ခါးသက်တဲ့အရသာကို မှနှစ်သက်တဲ့ အတွက် မစင်၏ အရသာမှာ ချိုချဉ်ခါး ဖြစ်သည်ဟု ပြောရကြောင်းပါဘုရား” လို့ လျှောက်တင်တော်မူမှ မင်းကြီးနှင့် တကွ ပြည်သူပြည်သားများက နောက်ဆုံးအမတ်ကို နှစ်ထောင်းအားရ အားပေးချီးမြှောက်တော်မူတယ်… မင်းကြီးလဲ နောက်ဆုံးအမတ်ကို သေဒဏ်က လွှတ်စေပြီး အဆောင်အယောင်များကို တိုးမြှင့်ပေးသလို ချီးစားခဲ့တဲ့ မူးမတ်များကိုလဲ အဆောင်အယောင်များ ပေးသနားတော်မူသတဲ့လေ။။။။။။
အဖေပြောတဲ့ မစင်အရသာ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ… တစ်ခုခုတော့ ရလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်... ကျနော်တို့ မောင်နှမလဲ အဖေပြောတဲ့ မစင်ပုံပြင်လေးမှာ နှစ်မြောခဲ့ရပါတယ်… အခုချိန် အဖေပြောမယ့် ပုံပြင်တွေကို နားထောင်ချင်နေသေးတယ်… အဖေ့ကို ကျောကုန်းဖုထိုးရင်း မျက်ခုံးမွေး သန်းရှာရင်းပေါ့လေ...
ခုလောက်ဆို မစင်ရဲ့ အရသာ ဘယ်လိုရှိကြောင်း သိကြရောပေါ့… အရင်မူးမတ်တွေလိုတော့ မစမ်းလောက်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ်… သေချာတာက အိမ်သာတက်တိုင်း ဖိုးစိန်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံပြင်ကို သတိရပြီး ဖိုးစိန်ကို မြင်ယောင်ပြီး ပြုံးမိမှာ ကြိုမြင်နေသလားလို့….
Writer Sein Lyan Time 6:17 pm 43 comments: Links to this post
ခုဆိုရင် ဆိုက်ပရပ်စ်မှာ နွေရာသီရောက်ပြီး… အငွေ့တွေ တလျှံလျှံ နဲ့ အပူရှိန်ကမြင့်လာပြီး… နေရာတိုင်းမှာ ပူလောင် ခြောက်သွေ့လို့ ရှိရှိသမျှ လူတွေက ကမ်းခြေတွေကို မနက် လင်းတာနဲ့ ရောက်ကုန်ပြီး… ကျနော်ကိုယ်တိုင် နွေမှာ ခြံရှင်းတဲ့ အလုပ်တွေကို လက်ခံရင် မနက်ကို (၅)နာရီလောက်ထပြီး မနက်(၈)လောက်ထိပဲလုပ်တယ်… တစ်ရက်တည်းနဲ့ မပြီးရင်တော့ နှစ်ရက်လောက် ဆက်လုပ်ပေါ့… မနက်(၈) နာရီ နေက တော်တော်ပူနေပြီးဆိုတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး… ခုရက်ပိုင်းလဲ အားနေတာနဲ့ အချိန်ပိုင်း ခြံတစ်ခြံ သန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်တယ်…
အိမ်ရှင် အဖိုးကြီးက ကျွန်တော့်ကိုချစ်လို့ ဆိုပြီး ခြံရှင်းပြီးတော့ ကျနော့်ကို မနက်စာ သူတို့ လင်မယားနဲ့စားဖို့ ဂရိဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတယ်… ကျနော့်အတွက် ခရမ်းချဉ်သီးကို အကွင်းလိုက် လှီးပြီး အိုးကပ်ကြော်တယ်… ဟာလူမီချိစ့် လို့ခေါ်တဲ့ ချိစ့် အမာကို ကြော်တာရယ် ကြက်ဥမကျက်တကျက်ကြော်တာ နှစ်လုံး… ပါမုန့်မီးကင် ထောပတ်သုတ်လေးနဲ့ နွေရာသီမှာ သောက်တဲ့ကော်ဖီအေး (Frappé) ကိုပြင်ဆင်ပြီး သူတို့လင်မယားကတော့ ဖရဲသီးကို ဟာလူမီချိစ့်နဲ့စားပြီး ဂရိကော်ဖီ(ကျနော့်အခေါ် မြေကြီးကော်ဖီ) ကိုသောက်တယ်
အိမ်ပြန်တော့လဲ သူ့ခြံထွက် ကြက်ဥတွေ ပေးလိုက်တာမှ အလုံးရေ တော်တော်များတယ်… ဥမကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော်လဲ စေတနာနဲ့ ပေးတာဆိုတော့ မလိုချင်ပေမယ့် စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုယူခဲ့တယ်… အပြန်လမ်းမှာဒီဥတွေကို ကုန်အောင်လဲ မစားနိုင် ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတွေးရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်ကို သတိသွားရမိတယ်… အမေသတိရတိုင်းပြောတဲ့ ရာဇဝင်ထဲတွင်စေတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဥ အကြောင်းပြောပြမယ်..
ကျွန်တော်ငယ်ငယ် လေးကတည်း ကပေါ့... (ငယ်တယ်ဆိုပေမယ့် တော်တော်လေး သိတတ်တဲ့ အရွယ် ရောက်နေပါပြီး)… ဥ ဆိုရင် ကျွန်တော်က ဘဲဥ၊ ကြက်ဥ၊ ငုံးဥ၊ ဥ မှန်သမျှ အကုန်မုန်းတယ်… လုံးဝကိုမကြိုက်တာ… ဒါပေမယ့် ပါမုန့် ကြက်ဥကြော်ကိုတော့ ကြိုက်သဗျာ… အသီးအရွက် အမျိုးအစားမှာပါတဲ့ … ကန်စွန်းဥ၊ ဝဥ ၊မုန်လာဥ ၊ပီလောပီနန်ဥ… ဒီဥတွေကိုတော့ တော်တော်လေး ကြိုက်တယ်… ကျွန်တော်တို့ အိမ်က အိမ်သား ငါးယောက်ထဲမှာ ဥမစားတာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ပဲ ဆိုတော့ လေးမဲ တစ်မဲနဲ့ ရှုံးလေ့ရှိတယ်…
ကျွန်တော် ဥကိုမုန်းသလောက် ညီ နဲ့ ညီမ က တော်တော်လေးကြိုက်တယ်လေ… အမေက သူတို့လေးတွေ ကြိုက်မှန်းသိတော့ ဘဲဥဟင်း၊ ကြက်ဥဟင်းတို့ကို ပြုတ်ချက်၊ ကြော်ချက်… ချက်နည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး ချက်ကြွေးလေ့ရှိတယ်… ဒီဥဟင်းက အချိန်လဲ သက်သာတယ်… လူလဲသက်သာ တယ်ဆိုတော့ အမေခမျာ တစ်ပတ်မှာ လေးရက်လောက် ချက်ချင်နေတယ်လေ..
ကျွန်တော် ဥမကြိုက်တာကို သိတော့လဲ ဟင်းချက်ရင် ငါးခြောက်ဖြစ်ဖြစ် အာလူး၊ ခရမ်းသီးဖြစ်ဖြစ် ရောချက်တယ်… ကျွန်တော်က အဲဒါလေးတွေပဲ ရွေးစားရတာ... အငယ်နှစ်ကောင်က ကျတော့ ဥလဲ စားရတယ်…ငါးခြောက်ဖတ်ကလဲ ပါလိုက်သေး… အာလူးဆိုလဲ နှစ်တုံးလောက်ရတယ် ဆိုတော့ ကြာတော့လဲ စိတ်ထဲမှာ တင်းတင်းလာ တာပေါ့…
တစ်နေ့ ကျွန်တော် မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ဟင်းချက်နေတဲ့ အမေ့ကို ဘာဟင်းလဲလို့ လှမ်းမေးတော့ အမေက သွားစရာလေးရှိလို့ မြန်မြန်ပြီးအောင် ဥဟင်းတဲ့… စိတ်ထဲမှာ ထောင်းကနဲ ဖြစ်သွားတယ်… တနေ့ကပဲ ကြက်ဥမွှေချက်ချက်ပြီးတယ်… ဒီနေ့တစ်ခါ ဘဲဥကို ရေကျန်ဆီပြန် ကာလသားချက်တဲ့လေ… စိတ်တိုတိုနဲ့ အမေ့နားသွားပြီး အမေဖွင့်ပြတဲ့ ဟင်းအိုးလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ဆီတဝင်းဝင်းနဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဥတွေ… ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ဒေါသတွေက တဖွားဖွား…
စိတ်ထဲမှာလဲ အခဲက မကျေချင်… တစ်ခါလာလဲဒီဥ နှစ်ခါလာလဲဒီဥ… သူမအားတိုင်း ချက်ပဲချက်နိုင်တဲ့ ဒီဥဆိုပြီး ဟင်းအိုးနဲ့အတူ အမေလုပ်သူကို ဒေါသဖြစ်လာတယ်… ဒါနဲ့ အမေ့ကို “ကျက်ပြီးလာအမေ” လို့ မေးတော့… အမေက “အံမယ်… ငါ့သားစိန်က ဒီနေ့ကျတော့ အမေ့လက်ရာကို သွားရည်ယို နေပြီးပေါ့ ဟုတ်လား… စားချင်နေတယ်ပေါ့လေ… ကြည့်လိုက်စမ်းဘာအုံး… ဘယ်လောက်ကောင်း သလဲဆိုတာ…လျှာလည်လို့ ဆွေမျိုးမေ့သွားမယ်... ကျက်ပါပြီးရှင်” ဆိုပြီးဟင်းအိုးကိုထပ်ဖွင့်ပြတော့…
ကျွန်တော်လဲ တင်းတင်းနဲ့ ဒီလောက်တောင် ချက်ချင်နေတဲ့ ဥဟင်း လျှာလည်လို့ ဆွေမျိုးမေ့အောင် စားကောင်းစေရမယ် ဆိုပြီး ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့် ဟင်းအိုးထဲ ကို ရှူးရှူးတွေ ပန်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ… အမေခမျာ “အဲတော့ တကယ် ပေါက်တယ်တော့်” ဆိုပြီး ဟင်းအိုးကို နမ်းလိုက် ကျွန်တော်ကို ငေးကြည့်လိုက်နဲ့ အမေ့ခမျာ ငိုမလို ရယ်မလို… အိမ်ရှေ့မှာ ဧည့်သည်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ အဖေကို ဟင်းအိုးပြပြီး လှမ်းတိုင်ပါလေရောဗျာ…
အဖေ နောက်ဖေးဝင်လာတော့ ဟင်းအိုးကို ထပ်နမ်းပြီး ဒေါသထွက်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ “မင်းကွာ” ဆိုပြီးရိုက်မလို့ နှီးဖျားနဲ့ ရွယ်ရုံရှိသေး… “အောင်မလေး သေပါပြီးဗျ” လို့ ကြိုအော်တော့ သူခမျာ တကယ်ပဲ ရိုက်ရမလိုလို… ပြန်ပြီးချော့ရမလိုလို အမေကတော့ ဟင်းကိုပဲ သွန်ပြစ်ရတော့ မလိုလို… ဥတွေကိုရေဆေးပြီး ထပ်ချက်မလိုလိုနဲ့ တော်တော်စိတ်ကုန်သွားပြီး သွန်လိုက်ရတယ်… တနေကုန်လဲ ပရိတ်ရွတ်သလို ပွစိပွစိလုပ်နေတာ မပြီးတော့ဘူး… ကျနော့်ကို ဒဏ်ခတ်တဲ့ အနေနဲ့ ဆီနဲ့ ဆားနဲ့ ထမင်းစားလိုက်ရတယ်…… မိန်လိုက်တာ... ဥဟင်းထက်တော့ ကောင်းတယ်…..
အိမ်မှာ ဥဟင်းချက်ရင် အမေက ကျွန်တော် မမြင်အောင် ချက်ပြီးတာနဲ့ ဖွက်တော့တာဘဲ... တစ်ခါတစ်လေများ အမေက ကျနော်ရှိတဲ့အချိန် ဟင်းကို သိမ်းထားဖို့များ မေ့ခဲ့ရင်… ညီမလေးက အစ အဖေ အဆုံး ထမင်းစားခါနီး ဟင်းအိုးကို ပြေးနမ်းလိုက်… ကျွန်တော့် မျက်နှာကို လာကြည့်လိုက်... ပြုံးစိစိနဲ့ ထမင်းမစားခင် အလုပ်ကို ရှုတ်လို့…
အခုချိန်ထိ အမေက အိမ်မှာ ထမင်းလာစားတဲ့ ဧည့်သည်တိုင်းကို ကျွန်တော် ရဲ့ဥ ရာဇဝင် အကြောင်း အမြဲ ပြောပြတုန်းပဲ… အမေက ဘယ်တော့မှလဲ မေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး… ဒီရောက်တော့ ဥကို မကြိုက်လဲ စားဖြစ်နေတယ်… တစ်ခါတစ်လေ အမေနဲ့ ဖုန်းစကားပြောလို့ “သားဘာဟင်းချက်လဲ” လို့မေးတဲ့အခါ ကျနော်ဥဟင်းချက်တာနဲ့ဆုံခဲ့ရင် ကျနော်က “ဘာဟင်းရှိမလဲ အမေရယ် ကျနော်သိပ်ကြိုက်တဲ့ “သေးဥဟင်း” ပေါ့ ”လို့ပြောရင် အမေ့ခမျာ တစ်ခစ်ခစ်နဲ့ သဘောကျလို့ မဆုံး…
သြော် … ကျွန်တော် မကြိုက်တဲ့ ဥ…. အခုတော့ တပွေ့ တပိုက်ကြီးဗျ…
Writer Sein Lyan Time 12:50 am 40 comments: Links to this post
အခုရက်ပိုင်း စိတ်ညစ်နေတယ်... နေကမကောင်းဘူး... ခေါင်းကရိုက်ခွဲ ချင်မိလောက်အောင် ကိုက်နေတယ်...ဘာကြောင့်လဲ မေးရင်ငိုမိတယ်... ယောကျာ်းလေးဆိုတော့ ငိုရင် အကိုတွေ အမတွေက ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး... အားတင်းထားတယ်... အိမ်ကို ဖုန်းမဆက်တာ (၃)လရှိသွားပြီး... အဖေလုပ်သူက သားဖုန်းမလာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး... မျှော်နေတယ်... သူငယ်ချင်းလုပ်သူကို ဖုန်းဆက်ပြီး အမေနဲ့ အဖေက သားအကြောင်း ရင်ဖွင့်တယ်... သားလုပ်သူက ဖုန်းမဆက်ဘူးတဲ့... သားကကျောင်းတက် နေတာ ခုလောက်ဆို ပြီးရောပေါ့တဲ့လေ... အဖေတို့ ထင်သလို မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် အလွန်တရာ ဝမ်းနည်းမိနေတာ... ဒါကြောင့် အဖေအသံကြားရင် ငိုမိမယ်... စိတ်မကောင်းဖြစ်မယ် ဆိုပြီး ဖုန်းမခေါ်ဘူး ပေတေပြီးနေနေတယ်... သူငယ်ချင်းလုပ်သူက နင့်အဖေက နင့်အသံကြားချင်မှာပေါ့... နင်ခေါ်လိုက်ပါ ဆိုတော့ ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်... သားလုပ်သူက အဖေထင်ထားသလို ဘွဲ့ရဖို့ ပညာသင် မဟုတ်တဲ့ အတွက် အဖေနဲ့ ဖုန်းပြောတဲ့အခါ မျက်ရည်က အတောက်လိုက်... အဖေကတော့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု... အဖေ့ကို လိမ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပေမယ့် တနေ့တော့ အဖေဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီး ရေလိုက်ငါးလိုက်နေခဲ့တာပါ... ထားပါတော့... အဖေနဲ့ ဖုန်းပြောပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ မကျေနပ်ချက်တွေက များလာတယ်... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါ... ငါ့အဖေဖြစ်စေချင် သလိုမဖြစ်တာလဲ့ဘဝဆိုပြီးတော့....
ဒါနဲ့ ညနေစားသောက်ဆိုင် ကိုအလုပ်သွားတယ်... အလုပ်ဝင်တော့ (SEA BASS)လို့ ခေါ်တဲ့ငါးတွေကို (fillet) လုပ်ဖို့ သူဌေးက ဝယ်ထားတယ်... ခါတိုင်းလဲ လုပ်နေကြ... ဆယ်နှစ်ကောင် လောက်ရှိမယ်... လုပ်နေရင်း စိတ်မကောင်းစရာ စဉ်စားမိတယ်... ခေါင်းကလဲ သေအောင်ကိုက်နေတယ်... ငါးအနံ့နဲ့ဆိုတော့ ပိုဆိုးတယ်... ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိ... ရှိနေတဲ့ ငါးအားလုံးကို စိတ်တိုတိုနဲ့ နှုတ်နှုတ်စဉ်း မိရက်သားဖြစ်သွားရော...
သူဌေး လင်မယားကမြင်တယ်... ဒါပေမယ့် သူတို့သားလို ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ကို တစ်ခွန်းမှ အပြစ်မတင်ပဲ အဲဒီငါးတွေကို ငါတို့ဒီည အမြည်းလုပ်မယ် ဆိုပြီး နောက်သေးတယ်... ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်လို့ မရဘူး... အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ မျက်ရည်က အတောက်လိုက်...
သူဌေးက စိန်ရေ... ဝိုင်သောက်လိုက် ပြီးရင်အိပ်လိုက် ဆိုပြီး ဝိုင်သောက်တယ်... တိုက်တာက နည်းနည်းပါ... ကျနော်က ညစ်ညစ်နဲ့ သောက်မိတာက များတယ်... မူးတယ်ပေါ့... အဲဒီညက ဆိုင်ကယ်စီးလာတာ ရဲတားတယ်... ဒဏ်ကြေးဆောင် ရမယ်ဆိုတာပဲ သိလိုက်တယ်... အိမ်ရောက်တော့ သံယောဇဉ် ဘလော့လေးကို ဝင်တယ်... လာနေကျ အကိုကြီးထွေး နဲ့ မအယ်လေး က အဲဒီညက မလာဘူး... မအားတာနေမှာ... အွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့ မငုံရယ် ညီမလေးရုံလေးရယ်ကို ရစ်မိတယ်... ပြီးတော့ အမတစ်ယောက်ကို ရစ်တယ်... ရစ်တယ်ဆိုတာ ဆဲတာမဟုတ်ဘူး... ဝမ်းနည်းမိတာ... ဖွင့်ချလိုက်တာ... ပြီးတော့ အကိုကြီးထွေး စီဘုံးမှာ မလာလို့ စိတ်မကောင်းတဲ့ အကြောင်းသွားရေးမိတယ် မူးပြီး ရိုက်တော့ (caps lock) ပွင့်နေတာ မသိဘူး... စာတွေ မပေါ်ဘူး... အကိုလုပ်သူကို စော်ကားသလို ဖြစ်သွားတယ်... ဒီနေ့ထိ ရင်ထဲမှာ မကောင်းဘူး... ခံစားလွယ်တာခက်တယ်... အကိုလုပ်သူက ညီလုပ်သူကို အပြစ်တောင် မပြောဘူးလေ... ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိ ဖြေလို့မရသေးဘူး...
ပြီးတော့ မကြီးခင်ဦးမေ ဘလော့ကိုသွားတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရန်ကုန် ပိုစ့် မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်... ဖတ်နေရင်းနဲ့ ငိုမိပြန်ရော... အမကြီးက သူ့ အကြောင်းလေး ရေးထားတာပါ... မူးလွန်တော့ အိပ်သွားတယ်... အိမ်မက်ထဲမှာ မကြီးခင်ဦးမေကို စွဲပြီး သူက အိမ်မက်ထဲထိ ပါလာတယ်... နိုးလာတယ်... သူ့ပိုစ့်ကို ပြန်ဖတ်တယ်... ဘာကြောင့်မှန်း မသိ မျက်ရည်က တောက်တောက်ကျတယ်... ဝမ်းနည်းတယ်... ကိုယ်ချစ်တဲ့ အမတွေ အကိုတွေကို အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်...
အဲဒီမတိုင်ခင် ကလည်း မခင်ဦးမေ ကို တစ်ယောက်ယောက်က နောက်သွားတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း... တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူး... မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ရတယ်... စဉ်းစားရင် အိပ်တောင်မပျော်ဘူး... ပြီးတော့ ကိုကြီးရင်နော် စီဘုံးမှာ လက်သရမ်းသွားတဲ့ ကိစ္စ... မသိလိုက်ပေမယ့် ညီပေါ်ပေါ် ပြောပြတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်... အကိုကြီး ကိုယ်တိုင် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ မကောင်းတာတွေ ရေးထားတဲ့စာ တော်တော် စိတ်ထဲ ဝမ်းနည်းမှာပဲဆိုတာ တွေးကြည့်ရင်း အကိုကြီးရင်နော် အတွက် စိတ်ထဲမကောင်းဘူး... နေလို့မရဘူး... ပြီးတော့ မအယ်လေး စီဘုံး... မကောင်းကင်ပြာစီဘုံး... မှာ လက်သရမ်းတဲ့ကိစ္စတွေ... တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်..
အရင်ကလဲ မကြီးဝါ ကိုရေးတာတွေ... မကြီးနော် ကိုစီဘုံးမှာ အော်သွားတာတွေ... ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်... ဒေါသဖြစ်တယ်... ကျနော်ကလူတစ်မျိုး... ကိုယ့်ကိုလာပြောရင် ဒီလောက်ဒေါသဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး... ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူကို သွားပြောရင်တော့ မခံနိုင်တာ အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်... ဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်လဲ ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဘူး ဖြစ်နေတယ်...
နောက်တစ်ခုက ဒီရောက်တာ ငါးနှစ်ရှိနေပြီး... ဒါကြောင့် ပြန်ဖို့အချိန်ကျနေပြီးလေ... ပြန်ဖို့ ဖိုးစိန်အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘုး... ဆက်နေဖို့ လုပ်နေရတယ်... ပိုက်ဆံတွေ မတန်အောင်ပေးပြီး မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ တောင်းပန်ရအုံးမယ် ကျောင်းကို... ဒီကိစ္စအတွက် တင်းခံနေရတာ... ရင်ထဲမောတယ်... ပြန်လို့ကလဲ ဘာမှ မသေချာဘူး... ဘယ်သူ့မှ မပြောချင်ဘူး... ခုတော့ ရေးမိတယ်...
ဒီလိုဒီလို ကိစ္စတွေများလာတော့ ရင်ထဲမှာ မခံစားနိုင်တော့ဘူး... စဉ်းစားတဲ့ခေါင်းကလဲ မကောင်းတော့ ရူးချင်သွားပြီး... လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်ပေါ့.... မနေ့က မေလေးဆီက စိတ်ဖြေနည်း ဖတ်ခဲ့တယ်... ပြုံးမိသေးတယ်... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမူးပြေပြီး နောက်နေ့ အကိုတစ်ယောက်ကို အမှားလုပ်မိတဲ့ ညီအဖြစ်လည်းကောင်း အဖေလုပ်သူရဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ သားအဖြစ်လည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်မသုံးမကျတဲ့ လူလို့ထင်ပြီး အိမ်တွင်းအောင်တယ်... မြင်သမျှ တွေ့သမျှ ကိုက်ဖြတ် ပေါက်ခွဲ.... ရလာဒ်က နွေ အကျီတွေ အပိုင်းပိုင်းပြတ်... အခန်းတစ်ခုလုံးလဲ အကွဲအပြဲ... နေစရာ ကုတင်တစ်နေရာစာပဲ ကျန်တယ်... ခုထိရှင်းနေတုန်း... ရှင်းရင်းနဲ့ စိတ်ကတိုလာလေ... ခံစားလေ ငိုမိလေ... ပြန်ဖွလေ... သံသရာ မဆုံးသေးဘူး...
ဒီကြားထဲ ကျောင်းကခေါ်နေသေးတယ်... ဘာလုပ်မှာလဲတဲ့... လုပ်မှာပါ... နေပါအုံး... ဦးနှောက်က မခံနိုင်သေးဘူး... ငါပြန်လို့ မဖြစ်သေးဘူး... ငါလာမှာပါလို့ စိတ်ထဲကပဲပြောနေမိတယ်... အကိုတွေ အမတွေ အိမ်အလာကို မျှော်မိတယ်... နက်ကမကောင်းဘူး... သူတို့အိမ် သွားရင် အလိုလိုနေရင်း မျက်ရည်ကျပြန်ရော... ဒါနဲ့ဘလော့ပိတ်လိုက်တော့မယ်လို့... နေဒေးကို ပိတ်နည်းလှမ်းတောင်တယ်... နေဒေးက စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်... ကိုယ်တိုင်လည်း မျက်ရည်နဲ့ ရေးထားတဲ့စာတွေ ရှိတယ်လေ... မဖျက်ရက်ပါဘူး... ဒါကြောင့် ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ အလွမ်းပြေ ကြည့်မယ်ပေါ့... မရပါဘူး... အမတွေ အကိုအိမ်တွေ လိုက်ချောင်းပြီး မျက်ရည်ကျ... အိပ်မက်တွေမက်... ညီညီမလေးတွေကို မျှော်မိတော့ နောက်နေ့မှာ စာရေးကောက်တင်မိပြန်ရော... အမှန်တော့ စုံထောက်ဇာတ်လမ်းက တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ်ရေးဖို့ အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးဘူး... ဝသန်ကရေးပါဆိုတော့ ပျော်စေပျက်စေ... အရူးကို ဘုံမြှောက်ပေးသလို ဖြစ်သွားတော့ ရေးထားတာတွေက ပေါနေတယ်... သိပေမယ့် စိတ်ထဲက ဖြေဆေး တစ်ခုအနေနဲ့ ရေးမိတာပါ... အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ...
ဒီမနက်လဲ မကြီးရောင်ပြန်ဆီက အီးမေးလ်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်တယ်... မရေးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ခိုလိုညည်းချင်းပို့စ်ကို အခုမျက်ရည်တစ်ဝက်နဲ့ ရိုက်တင်လိုက်တယ်... စိတ်မကောင်းဘူး...
ကျနော့်အဖေ့ ဆန္ဒလေးပြည့်စေချင်တယ်.... ကျနော့်အမေငိုတာ မကြည့်ချင်ဘူး...
ကျနော့် ချစ်တဲ့ ဘလော့ပေါ်က အမတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်... နေကောင်းစေချင်တယ်...
ကျနော်ချစ်တဲ့ အကိုတွေကို အမြဲ ပြုံးနေစေချင်တယ်...
ကျနော်ချစ်တဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ ညီညီမတွေကို အမြဲတမ်း အိမ်လာရင်ပျော်စေချင်တယ်...
ကျနော့်ကို ညီတစ်ယောက်လိုချစ်တဲ့ အကိုတွေကို စော်ကားမိတယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ်..
အမတွေကို စမိနောက်မိတယ်ဆိုရင် ဝမ်းနည်းစွာတောင်းပန်ပါတယ်...
တစ်ခုတော့ ပြောပါရစေ... ကျနော်က ခံစားလွယ်တယ်... အစွဲအလန်းကြီးတယ်ဆိုတော့ ဘလော့ပေါ်က အကိုတွေ အမတွေ ညီညီမတွေကို တကယ့် မောင်နှမအရင်းအချာလို ဆက်ဆံမိတော့ ရိုင်းသွားတာတို့ လွန်သွားတာတို့ ရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ... တစ်ယောက်ယောက်များ အိမ်ကိုမလာရင် ကိုယ့်ကိုဖယ်ထားသလိုခံစားမိတယ်... အဲလောက်ထိ အစွဲအလန်းကြီးတယ်... အိပ်မက်မက်တဲ့အထိပေ့ါလေ... နားလည်စေချင်ပါတယ်...
ခုလဲခံစားနေရတာတွေ များနေတော့ မတတ်နိုင်ဘူး... ခုရေးနေတာ ဘာတွေမှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိအောင် ပြန်ဖတ်ဦးမယ်.. သေချာတာက အခုရေးနေရင်းနဲ့ မျက်ရည်ကျတယ်...
မကြီးတွေ အကိုကြီးတွေ ညီတွေ ညီမတွေ စိတ်ညစ်သွားလား... ဝမ်းနည်းသွားလား... ကျနော်လဲစိတ်မကောင်းပါဘူး... ဒီလိုပိုစ်ကိုရေးတာထက် ဟာသပိုစ့်ကို ပိုရေးချင်ပါတယ်...
ခုချိန် အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒဆိုရင် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး ဘိုင်းကနဲ သေချင်တာပဲ... ကံကအဲလောက်ထိ မကုန်သေးဘူးလေ... ဆပ်ရအုံးမယ်...
(ငိုမိတဲ့သူများ ဘလော့တိုင်မှာ ဖိုးစိန်ငယ်ငယ်က လုံချည်လေး ချည်ထားတယ်... နှပ်တွေ မျက်ရည်တွေသုပ်ဖို့... လုံချည်က ဖိုးစိန် ပထမနှစ်သိမ့်ဆုယူတုန်းက လုံချည်... မလျှောထားဘူး... အားရပါးရသုတ်သွား) ဒီတစ်ကြောင်းလေးနဲ့ ပြန်ဖြေထား ပေးတယ်....
Writer Sein Lyan Time 1:45 pm 54 comments: Links to this post
Writer Sein Lyan Time 3:45 pm 45 comments: Links to this post
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ မြို့တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် စကားတစ်ခွန်း ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား…
“စားကျအုံးမလား…ဟောဒီက ပဲပြုတ် နံပြား”…………
“ပဲတီ ပဲမှုတ်….ပဲတီ ပဲမှုတ်………ရမယ်……..”
“အောင်သပြေ ဂန္ဒာမာ စံပယ် မွှေးမွှေးလေတွေ ရမယ်နော်…. ခရေကုံးလဲပါတယ်……..”
မိုးလင်း အာရုံတက်ပြီးဆိုရင် တစ်ချက်ကြားရလိုက် ပျောက်သွားလိုက် ပြန်ကြားလိုက်နဲ့ မနက်ခင်းဈေးသည်များ ရဲ့ အသံနဲ့ နိုးထရတဲ့ မနက်ခင်းလေး… အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်ပြီးပြီး ဆိုရင်တော့ လမ်းဆုံ လမ်းခွတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို သွားမလား…. မုန့်ဟင်းခါး ခေါက်ဆွဲ ထမင်းကြော် ခေါက်ဆွဲကြော် အသုပ်စုံ ရှိတဲ့ဆိုင်သွားမလား… ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖက်လမ်းက ကြက်သွန်ကြော် ဗူးသီးကြော် ဝယ်ပြီး ပဲပြုတ်ပင်ပေါက်နဲ့ ထမင်းဆီဆမ်းစားပြီး ကော်ဖီသောက်မလား… မလိုင် နံပြား ဆမူဆာ ကော်ရည်ဆီချက် ပေါက်ဆီ စသည့်ဖြင့် နေ့စဉ် မရိုးနိုင်အောင် မနက်အတွက် အစားအသောက် ပေါတဲ့ နေရာ …
မနက်စာ စာပြီးရင် မနက်ဈေးတန်းသွားပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသားငါးစုံ ကိုလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ဒေသ… ချောင်းရိုးတစ်လျှောက်မှ တက်လာတဲ့ ငါးပုစွန်တွေကိုလည်း စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်သေးတယ်… ဒါတင်မက ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ခြံကထွက်လာမယ့် ငှက်ပျော သဘောင်္ ဒူးရင်း မင်းဂွတ် ကျွဲကော ကြက်မောက် စတဲ့ရာသီ သီးနှံများကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ခြံသွား လက်ညှိးထိုးစားမလား…
နေ့ခင်းဘက်ရောက်ပြီးလား… သာကူပြုတ်ရွှေရင်အေး ခွက်ပြင် မုန့်ကျွဲသဲ မုန့်လင်မယား မုန့်စိမ်းပေါင်း မုန့်ကြာရိုး ဂျုံပြုတ် စတဲ့မြန်မာမုန့်မျိုးစုံ လှည့်လည်ရောင်းနေတဲ့ အော်သံတွေ နဲ့အတူ နေ့ခင်းဘက် စည်ကားနေတတ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အအေးဆိုင်တွေလဲ ပေါသေးတယ်..
နေသာချိန် ညနေချမ်းရောက်ရင်တော့ ကျိုက်သလန် တောင်ပေါ်ဘုရားမှာ ဘုရားဝတ်ပြုရင်း တောင်ပေါ်က ရှုခင်းသာကို လူငယ်တွေက ဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီ… မိသားစုတွေက ကားကိုယ်စီနဲ့ သွားပြီး ကျယ်ပြောလှတဲ့ သံလွင်မြစ်ကြီးနဲ့အတူ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ ကျွန်းစုတွေကိုကြည့်ပြီး မိသားစု စကားဝိုင်းဖွဲ့ရတဲ့ ညနေဆည်းဆာ အရသာက ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်… အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ကမ်းနားလမ်း တလျှောက် ကားမောင်းပြီး မုန့်ဟင်းခါ ကြာဇံချက် ဖက်ထုတ် ကြေးအိုး အားပူကြာပတေ အားလူးပူရီ ပဲလိပ် အစရှိတဲ့အစားအစာမျိုးစုံကို မြို့ပတ် ရှာစားရတာလဲ ပျော်စရာ ကောင်းလှပါတယ်…
ညဘက်ရောက်လို့ အိပ်ခါနီးမှာ ပလာတာ အီကြာကွေးနဲ့ နွားနို့သောက် ဒါမှမဟုတ် ရေခဲမုန့် ဖာလူဒါ စားအုံးမလား.. တောမကျ မြို့မကျ ဆိုတော့ လျှပ်စစ်မီးကလည်း လာတစ်ရက်မလာတစ်ရက်… ဖယောင်းတိုင် မီးအိမ်ထွန်း ရတဲ့ရက်တွေမှာ လကိုအားပြုရင်း မိသားစုတွေ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြန်ပြောနိုင်တယ် (မီးများလာခဲ့ရင် ဒီအခွင့်အရေးမရ... မိသားစုစကားပြောချင်ရင်တော့ မီးမလာပါစေနဲ့တောင် ဆုတောင်းရမလိုလို)… ဒီလိုညတွေမှာ သကြားမုန့်ဖက်ထုပ် သာကူမုန့်ဖက်ထုပ် ပူပူနွေးနွေး အော်သံလေးကိုပါ နားစွင့်နေတတ်ပြန်သေးတယ်…
ရာသီအလိုက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဘုရားပွဲတော်များ နဲ့စည်ကားတဲ့မြို့… ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲ ကနေစလို့ မိုးတွင်းတတွင်းလုံး ရပ်ကွက်အနှံ့ အသံမစဲ ပဌာန်းရွတ်သံကိုလဲ ကြားနေရမှာပါ… ဝါဆိုဝါခေါင် ရေဖောင်ဖောင် မှာ လှေကလေးတွေ စီးပြီး ချောင်းရိုးတစ်လျှောက် ဝါဆိုပန်းခူး ထွက်ကြမလား…
သီတင်းကျွတ်ပြီးဆိုရင် မဖြစ်ဖြစ်အောင် သွားကြတဲ့ ကျိုက်ခမီဘုရား ပွဲတော်နဲ့ စက်စဲကမ်းခြေ…မြို့နယ်တိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲတော်နဲ့ ဆီမီးမျှောပွဲတွေ… ရပ်ကွက်တိုင်း ပွဲတွေကဆက် အပျော်တွေက မပျက်…
ဆောင်းတွင်းကျရင် ပျော်ပျော်ပါးပါး အုပ်စုဖွဲ့ပြီး တက်ကျတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးနဲ့အတူ အပြန်ကိုဝင်လည်ကြတဲ့ ဘားအံမြို့က သာမညတောင်…
ဒီလို အစားအသောက်တွေ နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အသီးအနှံပေါများတဲ့ မြို့… မြစ်ချောင်း အင်းအိုင်တွေပေါပြီး ကျိုက်မရော ကျိုက်ပေါလော ကျိုက်သလံ မဟာမြတ်မုနိ ကျိုက်ခမီ ကျိုက်ထီးရိုး စတဲ့တန်ခိုးကြီးဘုရားနဲ့အတူ ထန်းပင် အုန်းပင် ရာဘာပင်များနဲ့ စိမ်းစိမ်းစိုစို အလှဆင်ထာတဲ့မြို့… ဒီမြို့က ကျနော်ရဲ့ဇာတိ ချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေ….. မော်လမြိုင်ဆိုတဲ့ မွန်တို့ဌာနေ… အနေချင်ဆုံး မြို့ဆိုရင်တော့ မိဘဘိုးဘွား အစဉ်အဆက်က နေခဲ့တဲ့ မော်လမြိုင်ဆိုတဲ့ တောမကျ မြို့မကျမြို့လေးမှာပဲ နေချင်ပါတယ်… … မော်လမြိုင်မြို့ မှာနေရင်တော့ ဒီနေရာတွေကို နှစ်တိုင်းပုံမှန် ရောက်နေ သွားနေတဲ့ အလေ့အထ… ဒီလိုသွားရတာကိုလဲ ပျော်တယ်… မော်လမြိုင်မှာ နေမှလဲ ဒီနေရာတွေကို စုံအောင် ရောက်ဖြစ်မှာပါ… အကယ်၍ အသက်အရွယ် ရတဲ့အထိ နေရမယ်ဆိုရင်တော့ အစားအသောက်ပေါများတဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ မှာရှိတဲ့ ခြံထဲက အိမ်လေးမှာ ခြံစိုက်စားရင် ဘဝကိုကုန်ဆုံးချင်ပါတယ်…
တစ်ဆက်ထည်းမှာ ပဲကျနော့်ရဲ့ ဘလော့ပေါ်က ညီအကိုမောင်နှများအားလုံးကို မော်လမြိုင်မြို့ကို အလည်တစ်ယောက် လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ… ဧည့်သည်အမြဲမျှော်တတ်တဲ့ မော်လမြိုင်သားတွေက အစားမျိုးစုံနဲ့ ဧည့်ခံပြီး မွန်ပြည်နယ်အနှံ့ လိုက်ပို့ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်… ဧည့်ဝတ်ကျေ မကျေသိချင် တယ်ဆိုရင်တော့ ဖိုးစိန်တို့ အိမ်ကိုရောက်အောင် လာခဲ့ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ…
ဖိုးစိန်တို့ မိသားစုက နေထိုင်ရေးနဲ့ ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စ အဝဝကိုတာဝန်ယူပါတယ်… အိမ်မှာအဖေကိုယ်တိုင် တီထွင်ထားတဲ့ ထော်လာဂျီ မာစီးတီး (၃)စင်းရှိတယ်… အမိုးဖွင့်ကားလေးတွေ… ရိုလာကိုစတာ စီးရတာထက် အဆတစ်ရာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်… ကျနော်တို့ ညီအကိုတွေက ဘရိတ်ဆီဖိုးသက်သာအောင်(အဖေပေးတဲ့ဘရိတ်ဆီဖိုးက ဗိုက်ထဲရောက်သွားလို့) အိမ်ကနေအလကားရတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည် ထည့်ပြီးမောင်းတယ်… ဒါကြောင့် ဘရိတ်အုပ်ချင်ရင် (၁)မိုင်လောက်ကနေ အုပ်ရတယ်… ကျနော်ကားမောင်း ကျွမ်းတာလဲ မပြောနဲ့… မြင်သမျှ မတိုက်မိ မရှိစေရ… (လှယဉ်ကျေးမယ် တွေ မောင်ဗမာတွေ အရွေးခံချင်တဲ့ ကောင်တွေရဲ့ တင်ပါးတွေလဲပါတယ်)ကဲဒီလောက်ဆို ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းကောင်းနဲ့ မော်လမြိုင်ကို အလည်တစ်ခေါက်လာဖို့ အားရှိလောက်မယ်ထင်တယ်…
“မွန်တို့ငှာနီ ရာမည သာစွနေပြည်…သာစွ နေပြည်.. ထန်းပင် ထန်းလက် ထန်းရွက်ညီညီ… တန်ခိုးကြီးဘုရားတို့စုံလင်ပေသည်… အထ္တရံ ဂျိုင်းပေါင်းဆုံပါသည် သံလွင်မြစ်ကြီးသက်သေတည်… သီးနှံများပေါကျွယ်ပေသည် မော်လမြိုင်မြို့ကသာယာလှပေသည်….. အလည်လာဖို့လဲ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်... ထော်လာဂျီလဲ စီးဖူးမည်.... အစားလဲစုံ... ပျော်ပါမည်... လာခဲ့ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်”
ချစ်သယ်ရင်း ကိုကိုနို( ရီနိုမာန်)ရေ... ကျေနပ်တယ်နော်...
ပုံတွေကို ရှာပို့ပေးတဲ့ တူရီးတော် ကိုကိုနွန် (တလနွန်)ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဒီပုံတွေကို ရိုက်ပေးခဲ့သူများနဲ့ တင်ပေးခဲ့သူများကိုလဲ ကျေးဇူးတင်လေးစားလျှက်
Writer Sein Lyan Time 1:09 pm 39 comments: Links to this post
စုံထောက်ကြီးဖိုးစိန် နှင့် ဘားအံမယ် မီးလေးဇာ ၏ စိတ္တဇလူသတ်မှု
တနေ့တ၌ ကျုပ်စုံထောက်ကြီး ဖိုးစိန်နှင့် ညီလုပ်သူအရဲလေး ချစ်ယောက်ဖဖြစ်သူ အိုင်ခီတို့ အထပ်နှစ်ရာ အမြင့်ရှိသော အကိုမိုးကုတ်သား ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့် ရီနိုမာန် မိုးပျံဟော်တယ်ကြီးပေါ်တွင် အေးအေးလူလူ သတင်းစာဖတ် ကော်ဖီသောက်ရင်း အင်တာနက်မှ အဆက်မပြတ် လာနေသည့် သတင်းစဉ်များကို ငိုက်မြည်းစွာ နားထောင်နေမိသည်…
မိန်းမဖက်မှ အမွေများကို တစ်သက်စား မကုန်အောင် တရားလွန် ရထားပြီးသည့် သကာလ မိန်းမများကို နေရာပေးသော အနေဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်စေပြီး အကျွန်ုပ်တို့ ယောက်ဖိယောက်ဖ သုံးယောက်မှာ မိမိတို့ ဝါသနာပါရာ စပ်စုသည့်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် မလွတ်တမ်း စုံထောက်စပ်စုခြင်း လုပ်ရန် အလို့ငှာ သူငယ်ချင်း၏ ဟိုတယ်ပေါ်တွင် လျှို့ဝှက်စခန်း ဖွင့်ပြီး အလကားနေနေသည်မှာ ယခုဆိုလျှင် (၉)လကျော်လို့ တစ်နှစ်ပင်ပြည့်တော့မည်…
အပြင်ဘက် မှန်ဘောင်အဆောက်အဦးကို ကျော်လွန်ပြီး ကြည့်လိုက်လျှင် ထိုးထိုးထောင်ထောင် မိုးပျံတိုက်တွေ ကြား လှုပ်ရှားသွားလာနေကြသည့် ညီဝသန်မိုး ကုမ္မဏီမှ မိုးပျံတက္ကစီများက ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်… လေစကိတ်များစီးပြီး ရုံးကို အပြေးအလွှားလုတက်ရင်း ဖုန်းတစ်လုံးဖြင့် ဘလော့ ရေးနေသူများ ကောမန့်နဲ့ စီဘုံးကို အော်နေသူများကိုလည်း လှမ်းကြည့်ရင်း အင်္ဂါဂြိုလ်မှ တောင်ပေါ်သား တင်သွင်းလာသည့် ကော်ဖီကို အရသာခံပြီးသောက်နေစဉ် ချစ်ညီယောက်ဖ အိုင်ခီက…
“ချစ်ကိုကြီးရေ… ခုတစ်လော ညီယောက်ဖတို့ အမှုလိုက်နေလို့လား မသိဘူး… မှုခင်းတွေ တော်တော်ကျဆင်း သွားတယ်နော်”…
ကျုပ်စုံထောက်ကြီးက မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးလို့ ညီလုပ်သူအရဲအား “ညီရေ ပြောပြစမ်းပါကွာ… အကိုတို့လိုက်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေကို”…
“ဟုတ်.. မိုင် လပ်ဖ်လီး ဘရားသား… လက်ရှိလိုက်နေဆဲ အမှုက (၁၇)မှု… ရဲဦးသွားတဲ့ အမှုက(၁၀)မှု… ခြေရာပျောက်နေတဲ့ အမှုက(၂၀)… လက်လျှော့လိုက်တဲ့ အမှုက(၁၁)မှု… အမ် နောက်ပြီးတော့..”
“ဟို့…ဟို့..ရပြီး.. ဒီလောက်ဆို တို့ညီယောက်ဖတွေရဲ့ လက်ရည်ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာသိနေပြီး… ဒီလိုကွ… အမှုဆိုတာ ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားရတယ်ကွ… ပြီးရင် အကွက်ကျကျ စီစဉ်မှ တရားခံရဲ့ ဟာကွက်တွေကို တနေ့ထက်တနေ့ ပိုသိလာမှာ… အဲဒီအခါကျမှ ..ဟော… ကွိကနဲနေအောင်……..”
စကားမှ မဆုံးသေး… အထပ်နှစ်ရာတိုက်ကြီး တုန်ဟီးသွားလောက်အောင် ကြောက်မက်ဖွက် အသံနက်ကြီး တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတော့ ညီယောက်ဖသုံးယောက် အကြည့်ချင်းဆုံလို့ နားစွင့်ရက်သား ဖြစ်သွားသည်…
“သေချာတယ်… ဒီအသံက ဒီဟော်တယ်ကနေလာတာ”… (ပြိုင်တူထွက်လာသောအသံ)
“အနည်းဆုံး အထပ်တစ်ရာလောက်က တက်လာတဲ့အသံ”.. (အိုင်ခီ)
“ဒါမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အသံဆိုတာသေချာတယ်”… (အရဲလေး)
သုံးယောက်သား ထင်မြင်ချက်ပေး လိုရာပစ္စည်းဆွဲပြီး အခန်းတံခါး ဖွင့်လိုက်တော့ ဘေးချင်းကပ်ရက် အခန်းမှာ တံခါးပွင့်နေပြီး စိတ်ပျက်ခြောက်ခြားနေတဲ့ ဟိုတယ်က ကျားဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို တွေ့လိုက်တယ်… အလျင်အမြန် အခန်းထဲဝင်သွားတော့ အဖြူဆွတ်ဆွတ် အိပ်ယာခင်း တစ်ခုလုံး သွေးနီနီတွေ စွန်းထင်းနေပြီး အိပ်ယာခင်းပေါ်မှာ ဝက်သားခုတ်တဲ့ ဓားမတစ်လက် ကိုတွေ့လိုက်တယ်…
ညီလုပ်သူ အရဲလေးက အလျင်အမြန် ဓားနားသွားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက် လက်ဗွေရာ ကိုဖတ်တဲ့စက်နဲ့ စကမ်ဖတ် ကော်ပီးကူးနေစဉ် ယောက်ဖလုပ်သူက အိပ်ယာခင်းပေါ်မှ သွေးစက် နမူနာ နဲ့အတူ ခုတင်ပတ်ဝန်းကျင်မှ တွေ့သမျှ ပစ္စည်း သေးသေးကြီးကြီး တစ်ခုမျှ မကျန်ကို ယူနေတယ်…
ကျုပ်စုံထောက်ကြီးက တော့ မျောက်တစ်ကောင်လို ခေါင်းကိုကုတ်ပြီး စဉ်းစားမိတာက … “အင်း… ဒီလိုအခန်းတွေမှာ သူငယ်ချင်း ရီနိုမာန်က အရေးကြီးတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုပဲထားတတ်တယ်… အထူးသဖြင့် ဘလော့ဂါ တွေကို ဦးစားပေးတဲ့နေရာ” ဆိုတော့… အခန်းထဲမှာ ရတဲ့အနံ့က မိန်းမရေမွှေးအနံ့ နဲ့အတူ ညှီစို့စို့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သွေးညှီနံ့ရနေတယ်… ပတ်ပတ်လည်အခန်းကို ရှာကြည့်တော့ ဆက်တီစားပွဲ အောက်က ယောကျာင်္းတတ်တဲ့ နေကာမျက်မှန်တစ်လက်က လွဲလို့လက်စလက်န ဘာမှမကျန်… ရေချိုးခန်းထဲသွားတော့ လက်ဆေးဇလုံနားမှာ သွေးစသွေးန… အိမ်သာခွက်ထဲမှာ ရေလောင်းချလို့ ပြန်တက်လာတဲ့ သွေးစများ… နေရာတကာသွေးစက်တွေ ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်…
တုန်နေအောင် ကြောက်နေတဲ့ ဟော်တယ်ဝန်ထမ်းကိုမေးကြည့်တော့ ဒီအခန်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က စုံတွဲတစ်တွဲ လာတည်းကြောင်း သဌေးကြီး ရီနိုမာန် ကနေပြီး ဒီစုံတွဲက သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်း… မိန်းမလုပ်သူက အရင်က ဘလော့ဂါ ဘားအံမယ် မီးလေးဇာဖြစ်ကြောင်း… သေချာဂရုစိုက်ဖို့ မှာကြောင်း… မနေ့ကတော့ သူ့ချစ်သူကို မတွေ့တော့ကြောင်း… ညကျတော့ မိုးပျံညဈေးမှာ ဓားဝယ်ချင်လို့ တက္ကစီခေါ်ပေးရသေးကြောင်း… ဒီမနက်တော့ လကမ္ဘာကို အလည်သွားမယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားကြောင်း… သွားတော့တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်ကြောင်း… သတိထားမိ သလောက်တော့ ပျော့တွဲတွဲ အထုတ်နှစ်ထုတ်ပါလို့ ကူသယ်ပေးခဲ့ရကြောင်း ဟိုတယ်အပြင်ရောက်တော့ အလျိုအလျောက် တခြားဂြိုလ်ကို ရောက်သွားတဲ့ အမှိုက်ပုံးထဲကို အလျင်အမြန် ထည့်ခဲကြောင်း… အခု အခန်းရှင်းဖို့လာတော့ လူကြီးမင်းတို့ မြင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်ကြောင်း… ကျုပ်ဖိုးစိန်နီးပါး စပ်စုနိုင်သူ ဝန်ထမ်းက ပြောပြပါတယ်…
ကျုပ်လဲ ဝန်ထမ်းကို ပိုက်ဆံနည်းနည်းပေပြီး အမှုဖြစ်နေတဲ့ အခန်းကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးမဝင်ဖို့ ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားဖို့ မှာရပါတယ်… ပြီးတော့ သယ်ရင်း ရီနိုဆီဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားတော့ ဂျူပီတာဂြိုလ်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးလွန်နေတာ သိရတော့ စိတ်မပူအောင် အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြပြီး ဘားအံမယ်ကို ရှာပုံတော်ဖွင့်ရပါတော့တယ်…
“ချစ်ညီယောက်ဖရေ… သေချာစစ်ကွ… ခုလက်ရှိသွေး နဲ့ သူ့ချစ်သူသွေး တူလာမတူလားဆိုတာ..”
“အင်း…ထူးဆန်တယ် ယောက်ဖကြီးရေ… သွေးကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်… သေချာတာက ဘားအံမယ်က သတ်ထားတယ်ဆိုတာပဲ… နောက်သွေးတမျိုးကတော့ ရှာတုန်းပဲ… ထွက်ပြေးသွားတဲ့ သူကိုဖမ်းဖို့သာလိုတာပါ”
“ညီအရဲရော… လက်ဗွေရာစစ်ပြီးပြီးလား… ရဲစခန်းကပို့ တဲ့ ဘားအံမယ် လက်ဗွေရာနဲ့ ဒီလက်ဗွေရာ တူလား…”
“ကွက်တိပဲ လပ်ဖ်လီး ဘရားသားရေ… မီးလေးဇာ လက်ဗွေရာက တူတယ်…”
“အင်း… တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ… စဉ်းစားစရာပဲကွ… သူက လူသတ်ပြီးရင်လဲ ဒီဓားကို ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ဖျောက်ခဲ့မှာပဲ… ပြီးတော့ အိပ်ယာခင်းတွေ စောင်တွေလဲ အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်ခဲ့မှာပဲ… ဘာလို့လက်စ လက်နထားခဲ့သလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပဲ”
“ဒါကတော့ ကိုကြီးယောက်ဖရယ်… စိတ်မနှံ့တဲ့သူက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အသေးစိတ်ကျနိုင်မလဲ… မဇာက အရင်က သူ့ချစ်သူကို အရမ်းချစ်လို့ မနာလိုဘူးဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတောင် ရေးဖူးတယ်လေ… သူ့ချစ်သူဖောက်ပြန်လို့ ခုအဲဒီစိတ္တဇနဲ့ သတ်လိုက်တာလားမှ မသိတာ”
သုံးယောက်သား မျက်နှာချင်းဆိုင် မျက်တောင်မခတ်ပဲ စကားမပြောမိကျ…
“ကဲ..ကဲ.. ဝသန်ကိုဖုန်းဆက်… ဒုံးပျံတစ်စင်း အမြန်ပို့ဖို့ပြော… တို့ယောက်ဖိတွေ လကမ္ဘာကို ထွက်ပြေးသွားတဲ့ မီးလေးဇာကို ရအောင်ဖမ်းလိုက်ဖမ်းမယ်… ဒါမှ တို့ညီအကိုတွေ စကြာဝဋာကျော် တော့မှာ”…
လကမ္ဘာကို ဒုံးပျံကြီး ဆင်းသက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အေးမြတဲ့ အထိအတွေ့နဲ့ အတူ မွှေးပျံ့နေတဲ့ ဇွန်ပန်းရနံ့လေးကို ရှုရှိုက်မိချိန်မှာ အိမ်က ပုံမလာပန်းပျက် မဒီအိုကြီးကို သတိတော့ရမိပါရဲ့… ကျုပ်ရဲ့မဒီအိုကြီးက ဇွန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်ပန်းကို သိပ်ကြိုက်တယ်လေ… တစ်ခါလောက်တော့ ဟန်းနီးမွန်းထွက်အုံးမယ်လို့ တွေးမိပါရဲ့…
ချိုင့်ခွက်တွေမှာ ပျံလန်နေအောင် ဆောက်ထားတဲ့ လပေါ်တိုက်တွေကိုကြည့်ရင်း လေစကိတ်စီးပြီး
“ကဲ… ချစ်ညီတို့… လူသတ်သွားတဲ့ အခန်းထဲက ဖမ်းယူလာတဲ့ အနံ့နဲ့ ပြန်ဖမ်းရမယ်… အနံ့ဖမ်းစက်ကိုဖွင့် ဒီစက်ကပြတဲ့ ရေဒါအတိုင်း ဒို့လိုက်သွားမယ် ဒီရေဒါက ကိုယ်သင်းအနံ့တူတဲ့ သူဆီမှာ ရပ်သွားလိမ့်မယ်… ငှဲ..ငှဲ..ငှဲ… ဘယ်ပြေးမလဲ မိချိုသဲ (အဲလေ) ဘားအံမယ်ရယ်… ဖိုးစိန်လက်က ပြေးမလွတ်ပါဘူးကွာ..”
ကိုကြီးရေ… ယောက်ဖရေ… မိပီဟ…ဒီတိုက်ပဲ… ဒီတိုက်ပဲ..ဟီးး..ဟီးးး…ဟီးးးး…နာမည်တော့ကြီးပြီး”
“တံခါးဖွင့်ပါ မီးလေးဇာ… ထွက်ပြေးလို့ဘယ်လိုမှ မလွတ်နိုင်ပါဘူး”
“အောင်မလေးးးး ဘယ်သူများလဲလို့… မျောက်မူးလဲဖွတ်ချိန်… အမူးသမားခီလောက် နဲ့ အရူးလေးတို့ပါလား… ဘာကိစ္စနဲ့များ ရာရာစစ အိမ်ကိုလိုက်လာရတယ်လို့… ကျွေးစရာ ဘာမှမရှိဘူး ပြန်တော့ ငါမအားဘူး”ဆိုပြီး စကားတွေ တရစပ်ပြောနေတဲ့ ညဝတ်အကျီပါးပါးနဲ့ မီးလေးဇာ…
“ဒီမှာ မီးလေးဇာ… နင့်ကိုလူသတ်မှုနဲ့ ဖမ်းရလိမ့်မယ်.. ရဲလက်ထဲမရောက်ခင် ငါ့တို့ ဆီမှာ အပြစ်ဝန်ခံပါ… နင့်ကို အပြစ်သက်သာ အောင်လုပ်ပေးမယ်…”
“ဟင်… နင်တို့က ငါ့ကိုတကယ်ဖမ်းကြမယ်ပေါ့… နင့်တို့နဲ့ငါနဲ့က သူငယ်ချင်းတွေလေ… ဘလော့တူတူ ရေးဖူးတယ်လေ… ဒီမျက်နှာလေးကို မထောက်တော့ဘူးလားဟင်…”
“မရတော့ဘူး… ငါတို့မှာ သက်သေခံ ဓား… နင့်လက်ဗွေရာနဲ့ နင့်ချစ်သူသွေးတွေ ကိုရထားပြီးပြီး… နင်အရမ်းချစ်လို့ သတ်လိုက်တာသိပါတယ်… ဥပဒေကိုတော့ လက်တစ်လုံးခြားမလုပ်ပါနဲ့… လိုက်နာရလိမ့်မယ်ကွယ်…”
“နင်တို့ ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ…. ငါ ကငါ့ချစ်သူကိုသတ်တယ်… ဟုတ်လား… သွေး… လက်ဗွေရာ..ဟားးး…ဟားးးး..ဟားး..”
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ကြည့်ပြီး..သေချာပြီး မီးလေးဇာ စိတ္တဇဖြစ်ပြီး ယဉ်ယဉ်လေး ရူးနေတဲ့သူဆိုတာ မျက်စပြစ်မိကြတယ်…
“ဒီမှာ ကိုစုံထောက်တို့.. စုံမထောက်လို့ တစ်ဖက်ပဲထောက်ထောက်… အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာရတယ်လို့အေ… ငါ့ချစ်သူသွေးတွေ ဆိုတာ မှန်ပါတယ်အေ… အဲဒါကအိပ်နေရင် သူနှားခေါင်းသွေးလျှံလို့ပါအေ… ဒါနဲ့ဗေဒင်သွားမေးတော့ ငါးရံ့နှစ်ကောင်ကို သူအိပ်တဲ့နေရာမှာ ခုတ်သတ်ရင် သူ့ရောဂါပျောက်မယ်… သူအိပ်ပြီးသွားမှ လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ ငါကဓား နဲ့ငါးကို သွားဝယ်ပြီး ငါ ဒီမလာခင် မနက်မှာပဲ သူအိပ်ခဲ့တဲ့မွေ့ယာပေါ်မှာ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ သေနေတဲ့ ငါးရံ့နှစ်ကောင်ကို ပက်ပက်စက်စက် ခုတ်သတ်ခဲ့တာပါအေ… ရာရာစစ… ငါ့ချစ်သူကို ဒီလောက်ချစ်တာ ခုတ်သတ်မလားအေ… အံပါရဲ့ အေ… အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာလို့ ငါ့ကိုတရားခံ လာဖမ်းနေတယ်အေ… ဟီးးဟီးး..ခွိခွိ ..ခစ်ခစ် ရယ်ရတယ်… ကိုလတ်ရေ… ချစ်ဆုံးလေး… အသည်းလေးရေ… လာပါအုံး… ဒီအစုံမထောက်တဲ့ ယောက်ဖ သုံးယောက်က ကိုလတ်ကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့… ခစ်ခစ်..ခစ်ခစ်”
အပြင်ထွက်လာတဲ့ ကိုလတ်ဆိုတဲ့သူ… အားပါးပါးးးး အပေါ်အကျီ ဗလာကျင်းကျင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးမို့မောက်နေတဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ ငှက်ပျောဖူးသဏ္ဍန် လုံးကျစ်နေသော လက်မောင်းသားက သုံးနှစ်အုန်း ပင်စည်လောက်ကအသာလေး… ညာဘက်လက်ဖျံရိုးမှာပင် ကျုပ်တို့သုံးယောက် တွဲလဲခိုလို့ရတဲ့ အနေအထား… ပေါင်တလုံးက နှစ်တရာကျွန်းပင်လို တုတ်ခိုင်ခိုင်ဆိုတော့…
“ခွင့်ပြုပါအုံး… အမှုလေးတွေ လိုက်စရာရှိလို့...ဟဲ..ဟဲ..”
“ဒုံးပျံစောင့်နေပြီးဂျ.. အနော်တို့ နောက်ကျနေလို့...ဟီးးးး”
ယောက်ဖိ ယောက်ဖ သုံးယောက် ခေါင်းချင်းဆိုင်လို့ အမှုတစ်ခုတော့ ကွင်းလုံးကျွတ် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…
နောက်အမှုတွေ အတွက် သင်ခန်းစာရတာပေါ့..
ဒီစိတ်ကူးယဉ် စုံထောက် ဇာတ်လမ်းလေးကညီဝသန်မိုးက ကျနော့်ကို အကိုရယ် အလွမ်းတွေ အချစ်တွေထက် ပြန်ပေးဆွဲ သတ် ဖြတ်တဲ့ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း တွေရေးပါလား ဆိုလို့ ဒီဟာသစုံထောက် ဇာတ်လမ်းလေးကို ရေးဖို့ဖြစ်လာတာပါ… အပျော်သဘောမျိုး ဖြစ်အောင်လဲ ခွင့်ပြုထားတဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ နာမည်ကိုပဲ သုံးချင်လို့ ရေးဖြစ်တာပါ… ခုနာမည်တွေအပြင် သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကိုပါ ပြောထားတဲ့ အတွက် ဟာသဖြစ်အောင် ရေးတဲ့သဘောပါ… အားလုံး တချက်ပြုံးနိုင်ရင်ကျေနပ်ပါတယ်..
စုံထောက်ဖိုးစိန် နှင့် စိန်တိုက်ပိုင်ရှင်မေတ္တာရောင်ပြန် ပျောက်ဆုံးသွားသော အတွင်းပစ္စည်း
စုံထောက်ဖိုးစိန် နှင့် ကန္တာရ အပျိုကြီးမငုံ ပျောက်ဆုံးမှု
စုံထောက်ဖိုးစိန်နှင့် အိပ်မက်ချစ်သူမက်မက် ပြန်ပေးဆွဲခံရမှု
စသည့် ခွင့်ပြုချက်ရထားသော နာမည်များဖြင့် ဆက်ရေးပေးပါမယ်… ပေါတောတော ဖြစ်နေရင်တော့ ဒီတစ်ပုစ်တွင်ပဲ ရပ်ပါရစေလို့…
Writer Sein Lyan Time 10:56 am 51 comments: Links to this post
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အဖေလုပ်သူက အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပေးမရောခဲ့ဘူး… အိမ်မှာပဲ ကစားစေခဲ့တယ်… အိမ်မှာကစားလို့ ရအောင်လည်း လိုချင်တဲ့ ကစားစရာတွေကို စိတ်ကြိုက်ဝယ် ထားပေးတယ်… “တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး” ဆိုပြီး ရပ်ကွက်ထဲက သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းရင် ငယ်ငယ်နဲ့ အပေါင်းအသင်း ပျက်မှာကြောက်လို့ ဘယ်သူ ဘယ်သူမှ အခေါ်အပြော သူငယ်ချင်းလုပ်ခွင့် မရှိခဲ့ဘူး…
ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အပြင်ထွက်ဖို့ နေနေသာသာ အိမ်မှာရှိတဲ့ မောင်နှမသုံးယောက်တည်းနဲ့ ကစားချိန်တောင် မလောက်ဘူးလို ဖြစ်နေတယ်… တစ်ခါတစ်လေ အကိုအမ ဝမ်းကွဲတွေအိမ်ကို ပါမစ်နဲ့ သွားကစားရတဲ့ အချိန်ကလွဲလို့ပေါ့… ကြီးလာတော့လဲ ရပ်ကွက်နဲ့ အဆက်အဆံ မရှိတဲ့ အတွက် ရပ်ကွက်ထဲကသူတွေကို ရှိန်ပြီး စကားမပြောတော့ဘူး… သူငယ်ချင်းဆိုလို့ ကိုယ့်ညီ ညီမလို့ လက်ညှိုးထိုးပြီး ပြရုံကလွဲပြီး အပေါင်းအသင်းမရှိခဲ့…
အဲဒီအခါကျမှ အဖေက ငါထိန်းချုပ် တာများသွားတယ်.. မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိတွေ့ ခွင့်ပေးတော့ နေသားကျနေပြီး ဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့အဖို့ ရပ်ကွက်မှာ အပေါင်းအသင်းမရှိတော့ဘူး… အရွယ်ပဲ ရောက်နေပြီလေ… ကိုယ့်ကိုလဲ ရှိန်နေကြပြီးပေါ့…
ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းတော့ အဖေက “သားက ခုဆိုရင် အပြင်လောက ကိုရောက်တော့မှာ… မိသားစုထဲမှာလို သားကိုအမြဲ အနိုင်ပေးတဲ့သူ ရှိချင်မှရှိမှာ… ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့နိုင်သလို… ကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့သူနဲ့ တွေ့နိုင်တယ်… ဒါကြောင့် ဘယ်အခြေအနေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းကောင်း တစ်ယောက် ကိုတော့ ရအောင်ရှာပါ… မိတ်ဆွေဆိုတာ ရှိထားသင့်တယ်… အရေးကြုံလာတဲ့ အခါသူ့ အရေးကိုယ့်အရေးဖလှယ်နိုင်မယ့် သူငယ်ချင်းမျိုးပေ့ါ” ဆိုပြီးမှာတယ်…
ပြီးတော့ “အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က ယောကျာ်းလေးဆိုတော့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် ငွေရေးကြေးရေး စွန်းထင်မှုမရှိအောင်နဲ့ မိန်းမကိစ္စ စွန်းထိမှု မရှိအောင် သူငယ်ချင်းကြား ရှောင်ပါ… ဒီနှစ်ခု က သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေချင်း အကြည်ညိုကို ပျက်ပြားစေတယ်”… ဒါကအဖေအမြဲမှာတဲ့စကားး..
ကျနော်ကိုယ်တိုင် ခံယူထားတာကလဲ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ပေါင်းသင်းပြီး ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခရှိသလို သုခလဲ ရှိမှာပဲလေ… ကိုယ်ချစ်လို့ ခင်လို့ သူငယ်ချင်းလုပ်မှတော့ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အပြုအမူမျိုး သူငယ်ချင်းအပေါ်မှာ မလုပ်မိအောင် ရှောင်တယ်… ကိုယ်တောင်မကြိုက်ရင် တခြားတစ်ယောက် ကြိုက်ပါ့မလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ပေါ့… ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေ မကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်းတွေ ကြုံလာရင်လည်း သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ နဲ့ ဒိုးတူဘောင်ဖက် ရပ်တည်နိုင်ရမယ်… သူစံစားရင် ပျော်ရမယ်… သူခံစားနေရင်တော့ အားပေးရမှာပေါ့… ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးထားခဲ့ပါတယ်…
နေစဉ်နဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်းမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ တွေ့ရင်လည်း လက်တွဲဖေးကူခေါ်ရမယ်… ကိုယ်မခံစား နိုင်သော သောက တွေတွေ့ရင်လဲ မျှဝေခံစား ပေးမယ့်သူ ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်…
ကျနော့် ဘဝမှာ ဒီနေ့ထိ မုန်းတဲ့သူရယ်လို့ မရှိခဲ့ပါဘူး… သူငယ်ချင်း ရတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အလိုလိုက်ခြင်းကို ခံရတာများတယ်… ဆိုးတာကို သိပေမယ့် ချစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးခြင်း သံယောဇဉ် ကြီးလွန်းခြင်း စတဲ့အချက်တွေကြောင့် ကျနော့်ကို သည်းခံကြပါတယ်… တစ်ခုခုဆို ကျနော့်ရှေ့ကနေ ရပ်တည်ဖြေရှင်း ပေးတဲ့သူက များတယ်… ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ ဘယ်လောက်ပင်ဆိုးဆိုး ကျနော်ဆိုးတယ် ဆိုတဲ့အထဲမှာ မနာလိုဝန်တို မစ္ဆယ စိတ်မရှိခြင်းပါပဲ… တစ်ခုခု လိုအပ်လို့ အရေးကြုံလာလို့က ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ဖြေရှင်းပေးဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေခဲ့ပါတယ်… နားမလည်နိုင်သော သံယောဇဉ်တွေ နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေက သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ကြားမှာ အမြဲရှိနေပါတယ်…
များသောအားဖြင့် ကျနော်ကံကောင်းပါတယ်… ကျနော့်ကို ချစ်တဲ့သူ များပါတယ်… ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း မုန်းဖို့ဆိုတာထက် အမုန်းကိုမေ့ပြီး ဥပေက္ခာပြုထားလိုက်တယ်… တစ်ယောက်ယောက် ကိုမုန်းဖို့ထက် ချစ်လာဖို့ပဲကြိုးစားမိတယ်… (မုန်းနေရတာ ပင်ပန်းတယ်ထင်လို့) သူ့ဘက်က မုန်းတော့လဲ ကိုကခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်… အဓိကက သူကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း သူမကောင်းတာကို သိနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်က အကောင်းဆုံးကို လုပ်ပြပေးနိုင်ဖို့က အဓိကပါပဲ… …
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန် စိတ်အစာကျွေးပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တယ်..
တစ်ခါတစ်လေ အော်ငေါက်ရင်းလဲ အကျိုးအကြောင်းပြ ပြောဆိုဆုံးမ နိုင်ရမယ်…
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်လိုပျော့ညံ့စွာ အနားထိုင် မှိုင်နေတတ်သေးတယ်...
တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ အကိုလို အမလို အနားမှာ နေပြီး ရင်ဖွင့်သမျှကိုနားထောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူ..
တကယ်ကို စလိုက် နောက်လိုက် စိတ်ကောက်လိုက်နဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ မနာလိုမှုတွေ မရှိဘဲ နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ ဘဝလေးကိုရရင် ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေပါစေ… အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု အတွက် ဒီသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေက ဘဝ အမောကိုပြေစေမှာပါ… ဒီလို ဘဝအမောကိုပြေ ပျောက်စေတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကို ဒီဘဝမှာ တွေ့ရဆုံတွေ့ခွင့် ရတာဟာ ကျနော့်အတွက်တော့ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ… ဘယ်တော့မှလဲ မေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး…
အခုဆိုလဲ ကျနော်ဒီဘလော့စာမျက်နှာပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ညီအကိုမောင်နှမလို သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ အစစ်တွေ ထပ်ရပြန်တယ်… မမြင်ရတဲ့ သံယောဇဉ်ကြားထဲက ကျနော့်ဘဝ တစ်ခုလုံးအတွက် တွေးတောပူပန် ပြီး ကျနော့်ဘဝရှေးရေးကို စဉ်းစားပေးတဲ့ ဘဝကို ပဲ့ပင်ဆုံးမ သွန်သင်ပေးတဲ့ အကိုတွေကို တွေ့ရတယ်… အမြဲတမ်း ဆုံးမပေးတဲ့ အမတွေ ကိုတွေ့ရတယ်… သူငယ်ချင်းအဖြစ် ရှေ့ကရပ်တည်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရတယ်… အကိုထိရင် မခံနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ချစ်ကြတဲ့ ညီတွေ ညီမတွေ ရတယ်… စဉ်းစားကြည့်… ဒီလူတွေက ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာ တွေ့ကြတယ်… ဆွေမျိုးရင်းချာ မောင်နှမတွေ မဟုတ်သည့်တိုင် ဖော်ပြလို့မရတဲ့ အကြင်နာတရားနဲ့ မေတ္တာတွေရှိနေတယ်… ဒါတွေဟာ မိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲ…
ဒီအတွက် ကျနော် အားလုံးကို ခင်မင်ချစ်ခင်ခွင့် ရတာ အတိုင်းမသိဝမ်းသာ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်… ချစ်ခင်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ ကျနော့်အကိုတွေ အမတွေကို လေးစားသလို သူငယ်ချင်း ညီ ညီမတွေကိုလဲ ချစ်ခင်ရပါတယ်…
ဒါကြောင့် ဒီလိုသံယောဇဉ်တွေနဲ့ “ဘဝတစ်ခုစာလုံး မမုန်းမဖက် အပြုံးစွက်လို့ မေတ္တာတွေထား အချစ်အားနဲ့ နားလည်ခွင့်လွှတ် သည်းခံရင်းနဲ့ မုဒိတာပွား မိတ်ကောင်းဆွေမွန်များ” ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့……
Writer Sein Lyan Time 2:15 pm 33 comments: Links to this post
Writer Sein Lyan Time 11:16 pm 45 comments: Links to this post
Writer Sein Lyan Time 9:30 am 32 comments: Links to this post
အဲဒီလို အသံကျယ်ကျယ် စူးရှအက်ကွဲ တဲ့အသံအိမ်ရှေ့မှာ ကြားပြီးဆိုရင် သိလိုက်တော့… ဖိုးစိန်လဲ ကုတင်အောက်တွေ တံခါးကြားတွေ ရောက်နေပြီး… အဖေလဲ ပြုံးနေပြီး… အမေလဲ အဆင်ပြေမယ့် စကားလုံး တွေရွေး နေရပြီး… အဲဒီ အသံပိုင်ရှင်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကျနော်တို့ မောင်နှမတွေ ဝမ်းကွဲ အကိုတွေ အမတွေ ဖင်တုန်အောင် ကြောက်ရတဲ့ အဖေ့ရဲ့ အဖေ… အဖိုး နာမည်က ဦးချစ်အောင်… ဒါပေမယ့် ကျနော်တော့ နာမည်ပေးထားတယ်… ဖိုးမုန်းရအောင်…တဲ့
များတော့အားဖြင့် ကျနော်က “ငါးပိအဖိုး”လို့ ခေါ်တယ် (အဖိုးတို့က ငါးပိလုပ် ရောင်းတယ်လေ) ငယ်ငယ်ကဆို အဖိုးရှိရင် အဲဒီအိမ်ကိုကျနော်တို့ မသွားဖူး… အိမ်လာလည်ရင်လည်း ငါးပိနံ့နံလို့ဆိုပြီး နှာခေါင်းပိတ် ထားလေ့ ရှိတယ်… ပြီးတော့ အိမ်မှာ အဖေတို့ အလိုလိုက်လို့ အစွမ်းကုန်ဆိုးတဲ့ ကျနော့်ကို အဖိုးက သူ့လက်ထဲ ဝကွက်အပ် ပြီးဆုံးမစေချင်တယ်… အဖေက လုံးဝ အထိမခံ အရိုက်မခံတော့ အဖိုးက မကျေနပ်ဘူး… ခုလဲ လမ်းမှာ အကိုတွေ စက်ဘီးစီး သင်ပေးနေတာကို အဖိုးလုပ်သူက အော်လို့ အဖိုးအိမ်ကို ခဲနဲ့ပေါက်ပြီး ထွက်ပြေးလာတာ…
တစ်ခါကလဲ အဖိုးလုပ်သူကို လမ်းမှာ “ငါးပိအဖိုး” လို့ခေါ်ပြီး ထွက်ပြေးတော့… အဖိုးက နောက်ကနေ ပြေးလိုက်တယ်… ကျနော့်ကို မိတော့ ရိုက်မယ်အလုပ် အဖိုးလုံချည် ဆွဲချွတ်ပြီး ထွက်ပြေးတာ… အဖိုးကရှက်ရှက်နဲ့ လိုက်ဖမ်းသေးတယ်… မမိဘူး… စိတ်ဆိုး ပြေတဲ့အထိ ရှောင်နေရတယ်… အဖိုးကို မကျေနပ်တိုင်းလဲ သူ့အိမ်ကို မယောင်မလည်သွားပြီး သူကိုယ်တိုင် အခြောက်လှန်းထားတဲ့ ငါးခြောက်တွေကိုခိုး ခွေးကျွေး ပြစ်လေ့ရှိတယ်လေ… အဖေက အမြဲပြောတယ် ငါ့ အဖေနဲ့ ငါ့သားက အရင်ဘဝက ရန်သူတွေ လားမသိဘူးတဲ့…
ကျနော့်အထင် အဖေက ကိုယ်လုံး ကြီးသလောက် စိတ်ထားနူးညံ့တယ်… အဖိုးနဲ့ တခြားစီပဲ ကျနော် အဖိုးကို လုံးဝ မချစ်ဘူး… ချစ်လို့လဲ မရဘူး… အဖွားလုပ်သူ အပေါ်တောင် မညှာတာ… အဖေငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောပြလို့ နားထောင်ရင်း အဖိုးကို လုံးဝ မချစ်တော့တာ… ကျနော်(၉)တန်းတက်တဲ့ နှစ်မှာ အဖိုးဆုံးတယ်… ဒါပေမယ့် အဖိုးဆေးရုံတက်တဲ့ အချိန်မှာ အဖိုးကို ပြုစုပေးခဲ့တယ်… မသေခင် အဖိုးက ဖိုးစိန် မင်းကငါ့ကို ကြည့်မရဘူး ထင်နေတာ ခုတော့ငါ့အနားမှာ… သေပျော်ပါတယ်တဲ့… ဆုံးတော့ အသက်က (၆၇)
အဖိုးရဲ့ မိန်းမ ကျနော့်အဖွား အဖေ့ အချစ်ဆုံးအမေ… နာမည်က ဒေါ်စန်းငွေ… အနေအေးတယ်… စကားနည်းတယ်… အဖေ့ကို အရမ်းချစ်တယ်… ယောက်ျားလုပ်သူ အဖိုးကို ကြောက်ရတယ်… အဖွားမသေခင်ထိ အဖိုးရိုက်တာ ခံရတုန်း… စိတ်မထင်ရင် အဖွားကို အိမ်ပေါ်က မောင်းချတယ်… တွေ့သမျှ ပစ္စည်းနဲ့ ကောက်ပေါက်တယ်… အဖေပြောပြဖူးတယ်… သူတို့တစ်ခါကွဲတော့ သူတို့အိပ်တဲ့ မွေ့ယာကို အဖိုးက တပိုင်းပိုင်းပြီး ယူတယ်... အဖွားအိပ်တဲ့ အပိုင်းကိုတော့ သယ်သွားခိုင်းတယ်ဆိုပဲ… အဲဒီလောက်ထိ အဖိုးလုပ်သူကဆိုးတာ…
အဲဒီအခါကျရင် အဖွားလုပ်သူက မျက်ရည်စမ်းစမ်းနဲ့ အဖေ့ဆီရောက်ရောက် လာတတ်တယ်… သမီးအိမ် တွေတော့ မသွားဖူး… အဖိုးလုပ်သူကို အဖေက ပြန်မပြောပေမယ့် အဖွားအတွက် အဖေစိတ်မကောင်းဘူး… ထမင်းတောင် မစားနိုင်ဘူး… အငယ်ဆုံးသား ဖြစ်တဲ့ အဖေ့ကို အဖွားကတော်တော်ချစ်သလို အဖေ့ရဲ့သားဦး ဖြစ်တဲ့ကျနော့် ကိုလဲချစ်တယ်… အဖွားအမြဲဖျော်တိုက်တဲ့ နွားနို့နဲ့ ဖျော်တဲ့ လက်ဖက်ရည်က အရမ်းကောင်းတယ်… ခုချိန်ထိ သောက်ချင်တုန်း… ဒါပေမယ့် အဖွားကသံယောဇဉ် ကြီးရှာတယ်…
အဖိုးကို မပစ်နိုင်ဘူး… နှစ်ရက်မကြာဘူး အိမ်ပြန်တယ်… ငယ်ငယ်က အလုပ်ကြမ်း လုပ်ရတဲ့ဒဏ်… ယောကျာ်းလုပ်သူ အဖိုးရဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်ထင်တယ် အဖွားက အသက်ကြီးတော့ ခါးကုန်းသွားတယ်… ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း အေးချမ်းနေတယ် အဖိုးဘာပြောပြော တစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောဘူး… အဖွားက အဖိုးမဆုံးခင် (၃)လမှာ ဆုံးတယ်… အဖွားဆုံးတော့ အဖေပြောတယ် “(၃)လ လောက် ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတယ် ဘာလုပ်လုပ် ဘာကိုင်ကိုင် အမေကို သတိရနေတာ… ပြုစုခွင့် ရခဲ့ပေမယ့် အမေမရှိတော့ဘူး ဆိုတဲ့အသိက အရာအားလုံးကို သိမ်းကျုံးယူဆောင်သွား သလိုခံစားရတယ်… ကျနော်တို့ အလှည့်ကျရင် အဲလို ခံစားမှုမျိုးလျှော့အောင် အမေ့ကိုပိုပြီးဂရုစိုက်ပါ”တဲ့လေ…
ကျောင်းဆရာ ဦးမောင်အေး ဆိုရင် ကျုံဒိုးရွာ တစ်ရွာလုံး လူတိုင်းသိတယ် (သူ့ခေတ် သူအခါကပေါ့)… ကျနော်တို့ အဘလို့ ခေါ်တဲ့ အမေ့ရဲ့အဖေ… အဖိုးရဲ့ မိဘတွေက တရုတ်ပြည်က တရုတ်စစ်စစ်တွေ… မြန်မာစကား မတတ်ဘူးတဲ့… အဖိုးကတော့ မြန်မာလိုမွတ်နေတာပဲ… အနေအေးတယ်… အမြဲပြုံးတယ်… အဖိုးဆီက စကားတစ်လုံး ထွက်ဖို့ တော်တော်စောင့်ရတယ်… ဗေဒင်ဝါသနာပါတယ်… သူဟောတိုင်းလဲ မှန်တယ်… ဒုတိယသမီး ဖြစ်တဲ့ အမေနဲ့ အမေ့မောင် အငယ်ဆုံးကို တော်တော်ချစ်တယ်… အဖိုးအချစ်ဆုံးက ကျနော့်ညီမအငယ်ဆုံး… သူ့သမီးအဖြစ် မွေးစားခဲ့တာ… အမေလုပ်သူ ကင်ဆာရောဂါကုဖို့ ရန်ကုန်မှာ ဆေးသွားကုတော့ အိမ်မှာ အဖိုးနဲ့ အဖွားရယ် ကျနော်တို့မောင်နှမရယ်… တခါတလေပြန်လာတဲ့ အဖေရယ်… ဆိုတော့ အနေနီးတယ်… အချို အရမ်းကြိုက်တဲ့ အဖိုးကြောင့် ကျနော် ထမင်းကို သကြားနဲ့ ဒူးရင်းသီး သရက်သီး ငှက်ပျောသီး တို့နဲ့ စားတတ်တဲ့ အကျင့်ရလာတယ်… အဖိုးဆုံးတော့ အသက်က(၈၂)…
နောက်ဆုံးပြောစရာ မကုန်လောက်အောင် အကြောင်းတွေများ တာက ကျနော့်အချစ်ဆုံးအဖွား… အမေ့ရဲ့ အမေ… နာမည်က ဒေါ်စိုးတင်… ကျနော်တို့ မောင်နှမတွေက အမေလို့ပဲခေါ်တယ်… အဖွားက မိသားစုကို ဦးဆောင်တယ် သတ္တိရှိတယ်… ပြောရဲဆိုရဲ ရှိတယ်… စီးပွားရှာတော်တယ်… အသက်ငယ်တုန်းက မိသားစု မှာသြဇာညောင်းတယ်… ရှိတဲ့သားသမီး တွေကို လိုလေးသေး မရှိအမြဲ ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်… ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ရောဂါသည် အမေ့နားမှာ နေတော့ ကျန်တဲ့သားသမီးတွေက မကျေနပ်ဖူး… အမေ့ကို အဖွားကပြုစုတယ်… ကျနော်တို့ မောင်နှမကို ထိန်းတယ်… အထူးသဖြင့် နို့စို့အရွယ် ကျနော့်ညီမလေးကို ပြုစုရတာဆိုတော့ တခြားသားသမီး တွေဘက်ကို မလှည့်နိုင်ဖြစ်တာပေါ့…
အဖိုးဆုံးတဲ့ အခါကျတော့ အဖွားက အမွေတွေ အကုန်လုံးကို အမေကလွဲလို့ကျန်တဲ့သားသမီးတွေကို လွှဲပေးတယ်.. အိမ်တစ်လုံးပဲ ကျန်တယ်… အဲဒီအိမ်က ကျနော့်အမေ ဝယ်ထားပေးတဲ့ အိမ်… သားအငယ်ဆုံးနဲ့ နေတာ... ဒီလိုနဲ့ အဖွားက အသက်ကြီးမှ သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်တယ်… ကျနော်နဲ့ အမေက ရန်ကုန်ခေါ်လာပြီး အဖွားကို ဆေးကုပေးတယ်… ပြန်လာတော့ အိမ်မှာပဲနေတယ်… သားသမီး လုပ်သူတွေ တစ်ယောက်မှ မလာကြဘူး… အကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ့…
အဖွားလုပ်သူက အမေ့ကို အားနာလို့ တခြားသားသမီး အိမ်လှည့်နေတယ်… သားသမီးတွေက ကျွေးနိုင်ကြပါတယ်… ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးလာပြီး ဖြစ်တဲ့ အဖွားက ဂျီးများတယ်.. စကားများတယ်… တချိန်လုံး ညည်းနေတာပဲ… စသဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အမေ့ဆီ ပြန်ရောက်လာတယ်… အဖွားလဲ ဘယ်မှ မသွားတော့ဘူး… စိတ်နာသွားပုံလဲ ရတယ်… အဖွားလောက် သားသမီးတွေကို ထောက်ပံ့တာ အဖွားပဲ ရှိတယ်လေ… အခုတော့ သားသမီးတွေက မကြည်ဖြူ ငြိုငြင်ချင်ကြတယ်
ဒီနေရာမှာ အဖေ့ကို ချီးကျူးမိတယ်… အဖွားဆေးကုလို့ ကုန်ကျတာကို တချက်ကလေးမှ မညည်းဘူး… တစ်ခါတစ်လေ အမေလုပ်သူက အဖွားကို စိတ်တိုင်းမကျလို့ပြောမိရင်တောင် အဖေက မကြိုက်ဘူး… “မသေခင်ပဲကျွေးရ ပြုစုရမှာ… သေမှ နောင်တရနေမယ်… ခုချိန်မှာ မင်းလို ငါ့မိဘကို ငါကျွေးမွေးခွင့် ရချင်တောင် မကျွေးနိုင်တော့ဘူး”တဲ့…
အဖွားဆုံးတဲ့ အချိန်ထိ သူစားချင်တာ သူဖြစ်ချင်တာကို ကျနော်တို့ လုပ်ပေးခဲ့ ရပါသေးတယ်… အဖွားဆုံးတော့ သားသမီးလုပ်သူ တွေက အဖွားရုပ် အလောင်းနားမှာ လာပြီး အမွှေးတိုင်ထွန်းငို… တနေ့ကို အခါတစ်ရာလောက် ကန်တော့ကြတယ်… သေပြီးမှ အမေလုပ်သူကို ကန်တော့တာ… သားသမီးသာ များတယ်… မသိရင် မသေခင်ကတော့ မွေးထားတာ အမေနဲ့ အမေ့မောင် ဦးငယ်နဲ့ပဲ ရှိတယ်လို့ ထင်ရတယ်… သေမှာ သားသမီးတွေက အမေ… အမေ…အမေ ခွဲမသွားပါနဲ့တဲ့… သံဝေဂရစရာပါ…
တကယ်တော့ အသက်ကြီးလာရင် များသောအားဖြင့် အသက်ငယ်သူတွေက အားမရဘူး အလိုမကျတော့ဘူး… စိတ်မရှည်တတ်ကြတော့ဘူးလေ…. သူတို့တွေရဲ့ ဘဝက မီးစာကုန် ဆီခမ်း နေတာကိုလဲသိတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ ဖြစ်ကြရတယ်… အဲဒီအခါ သားသမီးတွေကို မှီတွယ်လာ တတ်ကြတယ်လေ… ဒါပေမယ့် သားသမီးတွေ စိတ်မရှည်တာမျိုး ဂရုမစိုက်တာ မျိုးနဲ့တွေ့ရင် ဘဝနိဂုံးကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ချုပ်ရတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေကို တော်တော်များများ တွေ့ဖူးတယ်လေ…
ကျနော့်မိဘတွေ အလှည့်ကျလဲ ကိုယ်တိုင်က မငြိုငြင်အောင်… မွေးလာမယ့် သားသမီးတွေ မငြိုငြင်အောင် ကြိုးစား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း တတ်ချင်တယ်… ကျနော်လဲ အသက်ကြီးရင် ဒီအဖိုးအဖွားတွေ ထဲက ဘယ်လိုပုံစံ ဖြစ်မလဲလို့ တွေးမိတယ်… အသုံးမဝင်တော့တဲ့ အသက်အရွယ်ထိလဲ အသက်မရှည်ချင်ဘူး... ဖြစ်လာမှာတော့ ကံတရားအတိုင်းပေါ့…(အသက်ရှည်မယ်ဆိုရင်ပေါ့)
တူရီးတော် ကိုကိုနွန်(တလနွန်)ရေ…. ကျေနပ်လိမ့်မယ် လို့မျှော်လင့်ပါတယ်…
Writer Sein Lyan Time 3:12 am 31 comments: Links to this post